Porn နှင့်ပတ်သက်သော ED 1 ပုံပြင်များ - သင့် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောစာမျက်နှာ - စာမျက်နှာ 1 of 8
Porn- သွေးဆောင် ED အပိုင်း: RebootNation.org
နောက်ဆုံးတော့ထွက်နေသေးတယ်သူက MD ကနေသူ porn-သွေးဆောင် ED ခဲ့
ငါချစ်သူရည်းစားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့်ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုရခဲ့တယ်။ အသင်း ၀ င်သစ်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကညစ်ညမ်းခြင်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းသင်ကြားပေးမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေ့လာခဲ့တဲ့ MD အသစ်တစ်ခုမှနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
ဒီမှာအားလုံးယောက်ျားတွေမှငါ့စိတ်ရင်းမင်္ဂလာပါ! ငါအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုအကူအညီတောင်းနေတယ်၊ ​​ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ငါ့အခြေအနေကိုမိတ်ဆက်ချင်တယ်။ ငါအသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်၊ ငါ့လေ့ကျင့်ရေးကိုအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၆ လက ED နှင့် DE နှင့်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးတွင်ငါသည် porn နှင့် arousal စွဲလမ်းမှုကကျွန်ုပ်၏လတ်တလောဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။ သူမပြောခဲ့သည့်အတိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုဗေဒနည်းပါးမှုကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဆုံးရှုံးမှု .... ငါပြောသည့်အတိုင်းသူမ၏စိတ်ကျေနပ်နိုင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးတစ်ဝက်ကိုဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်ပြီးငါ့ကိုလူတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ခံစားစေခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်ရှုလေ့လာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထများနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းယန္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅-၂၀ နှစ်လောက်ကကျွန်တော့်ဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ ငါဟာပုံမှန်၊ ကျန်းမာပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းနိုင်ဖို့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဇီဝဓါတုဗေဒတွင်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတူးထုတ်မယ်ဆိုရင်ငါအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ရတော့မယ်။ လိင်ဘဝနှင့်အနာဂတ်အတွက်အောင်မြင်သောဆက်ဆံရေး။
ဆရာဝန်များကလူ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းအများကြီးကိုသိသော်လည်း, အသိပညာ၏ပင်မရန်ပုံငွေအတွက်သေးမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအချို့သောဖြစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ PMO နှင့် arousal စွဲ၏အန်တရာယျသေးခေတ်ရေစီးကြောင်းမရှိကြပေ။ ငါဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်းသူတို့ကိုငါအကြောင်းကိုကြားသိဒါမှမဟုတ်သူတို့ yourbrainonporn.com ကဲ့သို့ရှေ့ဆောင်များနှင့် nofap အသိုင်းအဝိုင်းများကအင်တာနက်ကိုအပေါ်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်သူတို့ဒါကြောင့်ကောင်းစွာဖော်ပြထားခဲ့သည်သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ (ငါ့အ exgirlfriend ကိုလည်းတစ်ဦးက MD လွန်းမျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ) ငါသိခဲ့ပါအဘယ်သို့ငါမပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့မိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်ရငျးနှီးလာသောအခါပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
ငါ 12-13 ခဲ့သောအခါငါနောက်ကျောကို VHS porn ရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကမည်သို့ပင်ဘယ်သူကိုအချို့အလွန်အမင်းဆွဲဆောင်မှုခဲ့ကြသည်, ဒါဇင်ကျော်အမျိုးသမီးတွေဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်တော်မူပြီးမှ, အစဉ်မပြတ်ငါ porn ကိုအသုံးပြုကြသည်။ အထက်တန်းကျောင်းကတည်းကအနည်းဆုံး 3-4 ကြိမ်တစ်ပါတ်ကျွန်မပိုကောင်းခံစားရရန် MO ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီ, နှင့်ကြိမ် PMO အများစု။ နည်းပညာတိုးတက်နှင့်ငါ့အထူးပြုများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးကိုပိုမိုပြင်းထန်သောလေမြို့များကိုအများကြီးရွေ့လျားလိုအပ်သောနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်း၏လမ်းတယ်အဖြစ်, ငါ့ porn အသုံးပြုမှုကိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ အဖြစ် ဆက်ဆံရေး porn စဉ်အတွင်းမိန်းကလေးတို့အကြား၌ငါအမြဲပင်, ငါ့ကိုပိုကောင်းခံစားရပါစေ, ငါ၏အလေ့အကျင့်ခဲ့ (မသိမသာပထမဦးဆုံးမှာဆက်ဆံရေး၏ဓာတုဗေဒ dampening နှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလုံးဝ3ရက်သတ္တပတ်အကြာပျက်ကွက်သောငါ၏လတ်တလောကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ဝသကဲ့သို့ထိုသူတို့ကိုအသံတိတ်နိုင်ရန်) ရငျးနှီးအတွက်ဝငျရောကျစှကျ သော်လည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးအကြီးအရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေး၏မရှိခြင်းအမြဲငါ့နှလုံးမှာချိုးဖဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်မှုနည်းခြင်းနှင့်လူ၏လျော့နည်းခံစားရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကြိမ်ခက်ခဲတဲ့ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ငါမိန်းကလေးအကြားရှည်လျားကွာဟချက်ရှိခဲ့သည့်အခါကျွန်မပိုပြီးအကြီးအကျယ် porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါအတိတ် 20 နှစ်အတွင်းနည်းပညာ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ပြဿနာရဲ့ပြင်းထန်မှုကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ကြီးပွားသတည်း။ 15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအင်တာနက်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူ လုပ်. , ငါကအစားအသောက်နှင့်နျူကလီးယားစစ်ပွဲကိုစတင်အကြောင်းကိုခဲ့တူသော porn စုဆောင်းထားတော့တာပဲ။ 10 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း DVD ကိုတပ်ကြီးမားလာပြီခဲ့ပါတယ်, ငါဒီဗီဒီစုဆောင်းထားတော့တာပဲ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်နိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဃ်းတိမ်ကိုစာကြည့်တိုက်များနှင့်ပေါရာဏ hard drive တွေနှင့် disk တွေ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုဖန်ဆင်းသည့်အခါထို့နောက်ငါအရာရာကွယ်ပျောက်ပစ်မယ့် HD မှာ, အခြိနျမရှေး, ငါ့ကိုငါလိုခငျြအရာအားလုံးကိုပေးသော website တစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ဟုတ်တယ်၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်ပထမဆယ်စုနှစ်အတွက်တစ်ခုတည်းသောလက္ခဏာဖြစ်သော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်းမိန်းကလေးများကိုကျွန်ုပ်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည်ဟုထင်ရသည့်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်အတူကျဆင်းခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်အကျင့်ဟာအထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ လတုန်းကကျွန်တော့်အကျင့်ကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကမိသားစုဝင်တစ် ဦး သေဆုံးပြီးပြိုကွဲသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး PMO ကိုမှီခိုပြီး ၄-၅ လနေလို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာအငြင်းပွားဖွယ်ရာများပြားသောလုပ်ခလစာများ၊ HD အရည်အသွေးများကြောင့်မိန်းကလေးငယ်များကိုခဏခဏနှိပ်ခြင်း၊ FF နှိပ်ခြင်း၊ ပြန်လှည့်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး PMO ၏ဝမ်းနည်းဖွယ်နှင့်အထီးကျန်ကမ္ဘာတွင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ …ယိုစီးမှုတွေကိုစုပ်ယူပြီးဖြစ်ပျက်နေတာကိုတောင်ငါတောင်မှမသိခဲ့ဘူး။
ပြီးတော့ငါ့ဘဝတောက်ပတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါအလုပ်မှာမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် သူမလည်းဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။ သူမသည်လှပပြီး sexy၊ ရယ်စရာကောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းနှိပ်လိုက်၊ ရယ်မောမိသည်။ မိနစ်တိုင်းအတူတကွသူငယ်ချင်းများအဖြစ်အတူနေခဲ့ကြသည်၊ နောက်ဆုံးတွင်သူမအပေါ်ကျွန်ုပ်အရူးအမူးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းလွန်ခဲ့သော ၆ လကစပြီးစတင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါဟာအံ့ in စရာကောင်းတဲ့ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုပါ။ ကျွန်မဘဝမှာပထမဆုံးမိန်းကလေးဟာငါနဲ့အတူအနာဂတ်ရှိမယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်အထိထိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်စို့ !!! လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ငပဲသည်သုညဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ သို့မဟုတ်ငါသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေလိမ့်မည် (ကျွန်ုပ်သည်ကြာရှည်နိုင်မည်ဟုမိုက်မဲစွာစဉ်းစားသည်၊ ၎င်းသည်အပိုဆုဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ GF ကသူမနှင့်အတူအော်ဂဇင်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကိုမုန်းတီးခဲ့သည်) ။ သူမသည် MD လည်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုပြforနာများကြောင့် (ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင် ED ၏အဖြစ်များသည့်အကြောင်းရင်း) ကျွန်ုပ်သည်ငယ်လွန်းသေးသည်ကိုသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၌ဘာမှားနေကြောင်းမသိခဲ့ပါ။ အစပိုင်းမှာတော့ဆက်ဆံရေးအသစ်ကနေပူပန်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ နောက်လာမယ့်စာမေးပွဲကစိတ်ဖိစီးမှုလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူမပိုကောင်းလာမယ်လို့သူစိတ်ချပြီးစာမေးပွဲကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်လေ့လာနေတုန်းသူမခံစားချက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့သူမစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
၂ ပတ်ကြာပြီးနောက်စာမေးပွဲပြီးတဲ့နောက်သူကျွန်တော့်ဆီလာလည်ပတ်တဲ့ကျွန်မရဲ့ယူရီကာအခိုက်အတန့်လေးပါ။ သူမအိပ်ရာမှထ။ မနက်ခင်းသို့မသွားနိုင်တော့ဘဲရေချိုးရန်သွားကြောင်းပြောခဲ့သည်။ စောင်ကိုဆုပ်ကိုင်နေသည့်ကလေးတစ် ဦး ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းကို ဆက်သွယ်၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်သည်၊ HD porn ရုပ်သံလွှင့်ခြင်းနှင့် ၁၀၀% တင်းကျပ်စွာစိုက်ထူခြင်းကိုစက္ကန့် ၃၀ အတွင်းရရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့ endorphins တွေတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာတာနဲ့အမျှသူမကိုနံရံနောက်ကွယ်ကရေချိုးခန်းထဲမှာကျွန်မကြားခဲ့ရတယ်။ သူမနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့လို့ကျွန်မရဲ့နှလုံးကတုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့တစ်ခုခုအကြီးအကျယ်မှားနေတာကိုငါသိတယ်။ ကျနော်တို့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အပြန်နှင့်ပိတ်ထားခဲ့ကြသည်, ငါ့ကိုပြန်ယူပြီးနောက်2ပတ်အကြာထပ်မံဖြစ်ပျက် (ငါဘာကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာမသိ, porn နေဆဲခဲ့သည်) သူမကငါ့ကိုကောင်းသောအဘို့အထားခဲ့တယ်။ ငါစိတ်ပျက်ခဲ့တယ် ငါနှစ်ရက်အိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်နှင့်ဤခေါင်းစဉ်အပေါ်ငါတတျနိုငျသအားလုံးသုတေသနပြု, သင်တို့ကိုငါအံ့သြစရာကလူအားလုံးနှင့်ဤထောက်ခံမှုအုပ်စုအပေါင်းတို့မှငါ့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြအဖြစ်ဤပြproblemနာကိုဆက်ကပ်အပ်နှံဘဝနည်းပြများ, ငါအချက်အလက်အားလုံးကိုအလင်းကိုဖတ်ရှုအဖြစ် မီးသီးငါ့ ဦး ခေါင်း၌ချွတ်သွားလေ၏။ ငါဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုငါ့ရည်းစားကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမကငါဟာရူးနေတယ်၊ ​​သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုမတွေ့ရဘူး၊ လိင်တူချစ်သူဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ သူမဟာငါနဲ့မရင်းနှီးတော့ဘူး။ ဒါနဲ့သူ့ကိုငါပယ်ဖြတ် ယခုတွင်ငါသည်တစ် ဦး တည်းရှိနေပြီးအားလုံးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၉၀ အထိလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သက်သေပြရန်လိုအပ်သည်။
ရှည်လျားသော post ကိုများအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ နောက် 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့ရေတိုတစ်ခုခုကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပို့စ်တင်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
အခြား PMO စှဲလမျးသူနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံငါ့ကိုငါထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဒီရရှိရန်လိုအပ်နားလည်သဘောပေါက်လုပ်
ငါ PMO အရာအလွန်အကျွံလုပ်နေတယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကမှနားလည်လိုက်တာ၊ ဒါကငါ့ရဲ့လိင်နဲ့ရင်ခုန်စရာဘဝကိုထိခိုက်နေတယ်။ ငါဟာတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာငါနှစ်သက်တဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့စကားမပြောဖြစ်ပေမယ့်အရာရာကိုသယ်ဆောင်သွားဖို့သူကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါ PMO ကိုလျှော့ချလိုက်တဲ့အခါ (ကံမကောင်းတာကကျွန်တော့်အရှည်ဆုံး ၁၀ ရက်ပဲ) ငါယောက်ျားတွေအများကြီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါမှာပြproblemနာမရှိဘူး၊
သို့သော်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပုံမှန်ဖြည့်တင်းခြင်းမပြုပါ။ သူသည်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၅ ကြိမ် porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကျွန်ုပ်အားဝန်ခံသောယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်လွန်ခဲ့သည့်ညကလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ အဲဒီမှာစိုက်ထူပြissuesနာများ, စိတ်ပျက်ခြင်းရှိ။ , ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာတှေ့ဆုံပြီးဆုံးသောအခါကိုယျ့ကိုယျကိုအကောင်းခံစားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါသူနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်စကားပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
နောက်တစ်ခါ reboot လုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာထက်လိင်ကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်စိတ် ၀ င်စားတဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့အတူအိပ်ပျော်နေမယ့်အစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ လိင်သည်နှစ်သက်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သင့်ပြီးကျွန်ုပ်အဆင်ပြေစေရန် PMO ရွေးခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံလိင်ဆက်ဆံမှုအသစ်တစ်ခုနှင့်လိင်ဆက်ဆံတော့မည်ကိုသိသောအခါငါစိုးရိမ်ပူပန်တတ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် PMO ကိုရွေးချယ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ခြင်းတွင်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ သင်အနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်စေသောအရာများသည်သင့်အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ပြီးအဆုံး၌ ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်းငါသဘောပေါက်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင် 20s ၌ရှိကြ၏
အတူတူ2နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကို
ရည်းစားမယ့်အစားငါနှင့်အတူအလိင်ဆက်ဆံ၏ porn ကိုချောင်းမြောင်း။
ငါငိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကွဲခဲ့, ငါတစ် sexless ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်မဟုတ်နိုင်သည်ကိုသူ့ကိုကိုပြောသည်
သူ6ပတ် porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်
(သူတို့အ3ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသာ 4-6 ကြိမ်) porn သူလဲလျောင်းခဲ့သည်ထွက်လှည့်နှင့်နေဆဲစောင့်ကြည့်
သူကအရမ်းရှက်တယ်၊ သူကငါ့ကိုလိမ်ပြောတာကိုသူစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်၊ ကျွန်မတို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာစကားပြောဆိုခဲ့တယ်၊ အဲဒီမှာသူကရှက်စရာမလိုပါဘူး၊ သူကကျွန်တော့်ကိုသူပြောခဲ့တဲ့အမှားတွေအကြောင်းပြောပြနိုင်ပြီးအဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်
ကျွန်မရံဖန်ရံခါ porn ဆန့်ကျင်ဘူး, ဒါပေမယ့်မိမိအစွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးဟာသတ်ဖြတ်နေပါတယ်။
ငါသူ့ကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ သူ့ကိုငါကူညီချင်လို့ပါ၊ သူလည်းအဲဒီလိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။
မင်္ဂလာပါကျနော့်အနေဖြင့်အဘို့ဤချည်ဖတ်နေကြပြီ, ငါကဒီပေါ်တွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်အရချင်ပါတယ်။ မဆိုအကြံဉာဏ်ကိုတန်ဖိုးထားသည်။
ကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက် ၂၀ ကျော်နှစ် ဦး စလုံး) အတူတူရှိနေတာ ၂ နှစ်ရှိပြီ။ ငါတို့စပြီးချိန်းတွေ့တဲ့အခါသူကကျွန်မရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသိတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတူတူနေခြင်း၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းစသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင်သံသယလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ တကယ်တော့အချက်တစ်ချက် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်လုံးဝပြီးပြည့်စုံပါသည်။
ငါတို့စတင်ချိန်းတွေ့သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်များပြားသောလိင်ဆက်ဆံမှုများစွာရှိခဲ့သော်လည်းအခြားနေ့ရက်များတွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သူဟာလိင်မှုကိစ္စစတင်မလုပ်ဘူးဆိုတာသတိထားမိပေမဲ့သူကငါ့ကိုတကယ်ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ပြီးတော့လိင်ကအရမ်းကြီးတယ်၊ သူကအကွေးအရာတွေအတွက်လုပ်နေတယ်၊ ​​ငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုလည်းသူမငြင်းပါဘူး။
ငါသူ့ကိုကြာသပတေး - တနင်္ဂနွေနေ့မှာတွေ့လိမ့်မယ်။ သူ့ browser မှာ porn တွေအများကြီးသတိထားမိလာသောအခါပါပဲ။ သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်၊ မကြာခဏနှစ်ကြိမ် (နံနက် / ည) ကြည့်ရှုလေ့ရှိသည်။ ငါကအဲဒါကိုမဆန့်ကျင်ဘူး၊ သူကဖုံးကွယ်မထားဘူး၊ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မမြင်ရသောအချိန်၌ဤတွင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုမမှားပါ။
ဒီနေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူကြည့်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေတာပဲ။ သူ့ကို ၅ ရက်ကြာမတွေ့တော့ဘူး၊ ကျွန်တော်ညစာစားမယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်။ ဒါပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်အရွယ်ရောက်သူအချို့အချိန်ရလိုကြောင်းစာသားကိုပြောသောအခါနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုလိမ့်မည်။ နောက်တဖန်သူသည်အဘယ်သူမျှမကပြောသည်ပေမယ့်အတန်ငယ်အတင်းအဓမ္မခံစားရတယ်။ နှင့်အညီ, ဟေး, ငါတစ်ချိန်ကတစ်ချိန်ကကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူခံရဖို့ကိုချစ်လိုသူလူငယ်တစ် ဦး မိန်းမသည်။ ငါဟာလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်လို့ပြောနေတာကိုသူကအမြဲတမ်းပြောတာ၊
ငါအကြိမ်အနည်းငယ်တိုင်ကြားခဲ့ပြီးသူကပြသနာရှိတယ်လို့သူသဘောတူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမဟုတ်ဘူး (ugh) ။ သူဘာလဲဆိုတာမသိဘူး။ ငါသူ့ကိုဆရာ ၀ န်တစ်ယောက်ဆီလာလည်စေခိုင်းတာလား၊ သူ့မှာလိင်စိတ်နည်းတာကိုသူသဘောတူတိုင်းအချိန်တိုင်း ၃ ကြိမ် ၄ ကြိမ်တိုင်ဒီစကားပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲသူမသိဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်မှာသူကကျွန်တော့်ကိုရိုက်နှက်ပြီး၊ ငါကတွန်းအားမကြီးဘူးဆိုရင်ငါတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံတာပိုများလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ pushy ဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။
ငါကတုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​သူမအိမ်မှာ (အလုပ်ခွင်မှာစသဖြင့်) ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေတယ်၊ သူဟာရေချိုးခန်းကိုညစ်ပတ်နေစေဖို့သူကိုယ်တိုင်ရေချိုးခန်းထဲမှာပိတ်ဆို့ထားတာမဟုတ်ဘူး။ porn ကိုကြည့်ရှုရန်သူ၏အဓိကအချက်မှာ - ငါပျင်းလာသောအခါငါလုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်လိင်မပြုခဲ့တာကို ၈ ရက်တာကအစပြုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ ၈ ရက်ကအချိန်ကောင်းလို့ထင်ရပေမယ့်ကျွန်မအသက် ၂၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်မတို့လက်ထပ်ထားတာမဟုတ်၊ ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူး။ လိင်မပါဘဲ ၈ ရက်သွားစရာအကြောင်းမရှိပေမယ့်သူမလိင်မှုကိစ္စမရှိခြင်း
ဒါနဲ့ငါပြိုကွဲခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုအရမ်းဝမ်းနည်းစေတယ်၊ ​​ငါကဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ခံစားရစေတယ်၊ ​​ငါတို့၌လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်နှင့်အတူတကွနေထိုင်ရန်ဤအစီအစဉ်အားလုံးရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိစ္စနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုမလိုချင်ပါ။ ဒါကမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ငါချစ်ရသူနဲ့လိင်အလုံအလောက်မရှိဘဲငါ့ဘဝရဲ့ ၂ နှစ်တာကာလကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွက်ငါတို့ခွဲခွာရမယ်လို့သူ့ကိုငါပြောခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်သူက6ပတ်ကြာ porn မကြည့်ဘဲသွားတယ်။ ငါသူ့ကိုစိတ်ရှည်ရှည်ထားပေးနေတာ၊ ငါတို့ရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ကသိပ်မတိုးတက်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အချိန်ယူရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ထွက်လာသည်…သူကကျွန်မကိုလိမ်ပြောနေတာ၊ သူက porn ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့မှာနောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒီလူကိုငါအရမ်းချစ်လို့ငါငိုတော့တာပဲ။ ငါနဲ့အတူရှိနေချင်တယ်၊ ငါသူ့ကိုကူညီချင်တယ်၊ ငါသူ့ကိုကူညီချင်တယ်။ he he looked lying he he and he,, he he he he he he he he he he he he ထိုသူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါ၊
ငါသူ့ကိုပြောတယ်၊ သူပြောတာကိုသူရှက်ဖို့မလိုဘူး၊ သူဘာကြောင့်လိမ်ပြောလဲ၊ ငါမရူးဘူးဆိုတာငါသိတယ် ငါရပြီ။ အမှားတွေလုပ်မိတယ်
သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏နောက်ခြေလှမ်းများကိုသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ငါလိင်စတင်မပြုခဲ့သူနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသည်းအသန်မဆန်သောရည်းစားရှိရန်ငြီးငွေ့ပါသည်။ ငါ "ငါ့ကို vs porn" ရန်ပွဲရှိခြင်း၏ငြီးငွေ့ဖြစ်၏။ ငါသိချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီလူကိုတကယ်ချစ်တယ်၊ ပြီးတော့သူကငါ့အတွက်အရာရာတိုင်းအတွက်စုံလင်တယ်။
ငါသည်ဤအချက်မှာမှီဝဲမိပါတယ်။ သူကြည့်တာကိုရပ်လိုက်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်သလား။ သူသာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကငါတို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုအထောက်အကူပြုမလား။ သူရပ်လိုက်တာကိုငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ အလုံအလောက်ရှိရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ငါနောက်တဖန်သူ့ကိုအကြောင်းပြောသလား ငါ့ရဲ့နှလုံးသားကိုမပျက်စီးချင်ဘူး ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာအရမ်းရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူကလက်ထပ်ထိမ်းမြားတော့မယ်ဆိုတာကိုတော့သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။
တနည်းကား, ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသော post ကိုအဘို့အကြှနျုပျကိုလှတျတျောမူသျောလညျးငါစကားပြောတခြားဘယ်သူမှရှိသည်။
ဒီချည် မှစ. - ညစ်ညမ်းမှုပြwasနာဖြစ်သည့်ချိတ်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မည်မျှကြာအောင်လုပ်ခဲ့သနည်း။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စမှာအဓိကအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်၊ ဦး နှောက်မြူ၊ ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ED အကြောင်းကိုအများကြီးလှည့်ပတ် googled နှင့် porn နှင့် ED အကြား link ကိုအကြောင်းပြောသောနီးပါးဘာမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ “ လေးစားဖွယ်” ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားလုံးသည်၎င်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်းအဖြစ်မဖော်ပြခဲ့ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်ဆိုဒ်အများစုတွင်“ သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရနိုင်လျှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာမရှိတော့ပါ။ ဒါကသင်၏ ဦး ခေါင်း၌သာဖြစ်သည်”
ဒါနဲ့ဆရာဝန်တွေစတွေ့ပြီးပိုက်ဆံအများကြီးသုံးခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာအတူတူပါပဲ: "ညစ်ညမ်းမှစိုက်ထူဆိုလိုတာကသင်၏ ဦး ခေါင်း၌ ... Viagra ယူပါ။ "
နောက်ဆုံးမှာငါ ED ကိုသုတေသနပြုပြီးဆရာဝန်တွေ၊ စမ်းသပ်မှုတွေ၊ ဆေးဝါးတွေစတာတွေအတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးသုံးခဲ့တယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်က“ ဟေ့၊ မင်းသိတဲ့အတိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တာကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ " အဲဒီအစားသူတို့ဟာ ED နဲ့ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသက်သေမပြနိုင်တဲ့အခြားအရာတွေကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါ။ (ဥပမာ - စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း။ သင်ဟာသင့်ကြင်ဖော်နှင့်ထာဝရအတူရှိနေပြီးစိုးရိမ်မှုမရှိကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု…) သော်လည်း သင်အလေးချိန်ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်းမျှတသောအစားအစာကိုစားသည်၊ testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်သော်လည်း၊ T သည်အနိမ့် ED နှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိသော်လည်းအစာအိမ်ရောဂါများမှအပအစားအသောက်များ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင်းအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ အားနည်းနေ) နှင့်သင်၏ T ကတကယ်နိမ့်သည်မဟုတ်) ။
ဒီ site ကိုမကြာခဏလေ့လာတဲ့“ sexologists” ရဲ့လုံးဝဆိုးရွားတဲ့အကြံပေးချက်နဲ့reddit.com/r/sex…ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်“ လိင်အပြုသဘောဆောင်ခြင်း” ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်အသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုငြင်းပယ်ရုံတင်မကညစ်ညမ်းသော ED ၏အယူအဆကိုလည်းလှောင်ပြောင်သရော်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ငါ porn နှင့် ED ကိုအကြားဆက်သွယ်မှုမလုပ်ခြင်းအတွက်မိုက်မဲသည်ဟုခံစားရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှသုတေသနနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုရယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ porn သည်အကောင်းမြင်သဘောထား မှလွဲ၍ မည်သည့်အခါကမှပေါ်ထွက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါ "ဟေ့ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကားချပ်" လို့ပြောဖို့မစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအချိန်ကယေဘုယျအားဖြင့် fapping လိုပဲ။ သူကလုပ်တယ်၊ ပုံမှန်ပဲ၊ တကယ်တော့ကျန်းမာနေတယ်။
ငါခွဲစိတ်ကုသမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကဲဖြတ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် $ 25k မှ $ 30k အိတ်ဆောင်ထဲမှဖြစ်ပြီးရလဒ်များကိုအားမပေး (penile revascularization) ။ အဲဒီရက်ချိန်းပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ YBOP ကိုကျွန်တော်ထိမိခဲ့တယ်။ အိုးဘုရား၊ ဘယ်ဗျာဒိတ်တော်နဲ့ဘယ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း။
ပြီးတော့အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါက ၁၀၀% မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါသိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ PIED သည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကဖြစ်သည်။ ငါကဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာသောဆရာဝန်တွေကို ED မှာအထူးပြုအထူးကုဆရာဝန်ကြီးအပါအ ၀ င် (သူမိုင် ၁၀၀ လောက်ဝေးတဲ့ခရီးကိုသွားခဲ့ရတယ်)၊ စမ်းသပ်မှုထောင်ပေါင်းများစွာ; ဆေးပြားပေါ်ထောင်ပေါင်းများစွာ။
ထိုအခါငါလုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့သမျှ porn မှ fapping ဖြတ်ခဲ့သည်ထွက်လှည့်။ Unreal ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာကိုလက်ခံပြီးစိတ်မကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့အထူးကုတွေအပါအ ၀ င်ပညာရှင်တွေဆီကနေတက်တက်ကြွကြွရှာဖွေတာကိုတွေ့တော့ဒေါသထွက်မိပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဂယ်ရီ။ “ လမ်းမရှိ!” ဟုလူတိုင်းပြောဆိုနေချိန်တွင်သင်ဤအရာကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။
တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာဤပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆရာဝန်များအားတုံ့ပြန်ချက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူတို့ကိုပြောပြပါ တစ်ခုစိုက်ထူသိမ်းဆည်းပါ ... YBOP သူတို့ကိုညွှန်ပြ။
ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး၎င်းကိုဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ
ဤသည် PMO သည်မည်မျှမကောင်း
ဒီဟာအတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကသူဟာညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့် (သူမဈေးအကြီးဆုံးပြည့်တန်ဆာ) ဖြစ်ပြီး၊ သူမနဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မတစ်ဦးက fuck ဆိုတဲ့ PORNSTAR TO သို့ FAP, ဒါပေမဲ့ PERSON သည်သူမ၏ fuck ဆိုတဲ့လှန်နိုင်ခဲ့သည်နိုငျခဲ့
ဒါကကျွန်မဘ ၀ ကိုဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းစေခဲ့သလဲ။
ငါ nofap နှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ပေမယ့်ငါနေမကောင်းရှိသည်ယုံကြည်ခြင်း၌ငါကရေရှည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပါစေ။ အဘယ်သူမျှမ fap အများကြီးကူညီပေးသည်။ ဒါအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် ငါကျော်မယ်
[ဤသည်ကျွန်တော်ထပ်ခါထပ်ခါကြားဂန္ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်] ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီးအသက် ၁၂ နှစ်တွင် PMO ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်သည်ရှက်ရွံ့မှု၊ လူရွှင်တော်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ အတွင်းကျကျကျွန်ုပ်သည်နှောင်ကြိုးကောင်းကောင်းလုပ်လိုသော်လည်းမည်သူ့ကိုမျှမဆက်သွယ်ပါ။ ။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်ဟုအမြဲထင်ခဲ့ပြီးမျိုးရိုးဗီဇအကြောင်းတရားများကိုယခုအထိအပြစ်တင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်ညစ်ညမ်းသောနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းသောနေ့စဉ် (၁၅-၁၉ နှစ်) ကာလအတွင်းညစ်ညမ်းမှုကိုကျွန်တော် ပို၍ ရွံမုန်းဖွယ်များပြားသောအစွန်းရောက်ပစ္စည်းများသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူဟာအဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကနေ fetishes အထိ၊ shemale ပစ္စည်းအထိတောင်မှကျွန်မကိုလိင်တူချစ်သူတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတိုးပွားစေအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါမိန်းကလေးများနှင့်ဆက်ဆံမှုရှိသည်, လိင်ဆက်ဆံမှုမှလွဲ။ သူတို့နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့ကြ - ငါက 19 နှစ်ကညာအပျိုဖြစ်၏နှင့်ထူးဆန်းခံစားရတယ်။ ငါ့မှာ ED ရှိတယ် - ငါမတူတဲ့မိန်းကလေး ၄ ယောက်အတွက် ၄ ကြိမ်သီးခြားစီမထနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ တစ်နာရီမိုင် ၁၀၀ နှုန်းဖြင့်အတွေးများသည်ငါ့ခေါင်းထဲမှေးမှိန်သွားသည်။ ငါကိုယ်တိုင်မခံစားရဘူး ငါကူကယ်ရာမဲ့ခံစားရတယ်
ကိုယ့်ပြောချင်တာကကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရာအားလုံးထက်သင့်ကိုပိုမိုလွတ်သွားသည်။ ငါတို့တွေအတူတကွပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးပြီ။ သင့်ကိုငါမှန်မှန်မဆက်ဆံဘူး၊ ငါတကယ်သင့်ကိုနာကျင်နေပြီးနောက်ဆုံးတော့မင်းကိုသတ်ပစ်တယ်ဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။ ငါဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့ပျော်ခဲ့ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအကြောင်း၊ ကျွန်မတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသာမကဘဲပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါကျွန်မရဲ့ငပဲကိုဘောင်းဘီထဲကိုဘယ်လိုလှည့်ပတ်သွားလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းမစဉ်းစားနိုင်တော့ပါဘူး။ ငါ့ကိုယ်ငါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသေဆုံးသွားပြီလို့ခံစားရတယ်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် fap တောင်မရှိတဲ့ androgynous သတ္တဝါဖြစ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းစိတ်မဝင်စားဘဲလမ်းလျှောက်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ dickie နည်းနည်းတော့ဘယ်တော့မှထတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
မင်းရဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ငါဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသွေးစစ်တယ်၊ Cialis တယ်။ သူကငါ့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုံ့ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီငလျင်လှုပ်တာတွေကမင်းကိုထွက်ခွာဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး၊ ငါကနင့်အတွက်ကောင်းတယ်၊ မင်းကိုသုံးနှစ်နီးပါးငါမေ့ထားပေးပြီးမင်းကမင်းထွက်သွားပြီဆိုတာကိုတောင်ငါမသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ငပဲနဲ့တစ်ခုခုမှားတယ်လို့ငါထင်ပေမယ့်သူနဲ့ငါဟာငါတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ။
သငျသညျ left ကြောင့်, ငါ့ရည်းစားလည်းထားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ယခုငါရှိသောကြောင့် porn ၏သင်နှင့်သူမ၏ဘယ်ဖက်နှစ်ဦးစလုံးသဘောပေါက်ပြီးမှတစ်ဦးတည်းဖြစ်၏။ ငါဘာမှမထက်သင်ပြန်ပိုပြီးချင်နှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဤစာကိုဖတ်နှင့်သင်ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအရာအားလုံးထက်ထက်အကြှနျုပျနှငျ့အ dickie ဖို့ပိုအရေးကြီးလှသည်သဘောပေါက်ပါပြီ။ မျှော်လင့်, သငျသညျယခုငါ porn နှငျ့သငျသောခွေးမပြင်သို့ပစ်ကြနဲ့ကျွန်မအများကြီးကြီးမြတ်သစ်ကို Adventures အပေါ်နောက်တဖန်အတူဖြစ်နိုငျကွောငျးမကွာမီပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျမှဤစာရေးသားခြင်းနှင့်သင်ပြန်လာနှင့်ဘဝကိုသင်စရာမလိုဘဲနဲ့တူသောအရာကိုသတိရလျှင်သင်ငါသည်လည်းအစဉ်အမြဲ re-ဖတ်နိုင်ကဒီပြန်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အပြင်။ အစစ်အမှန်မကြာမီနောက်ကျောလာကြ !! ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လိင်တံနှင့် I.
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကကျွန်ုပ်၏မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုရရှိပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာတွင် PIED ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လုံလောက်စွာခဲယဉ်းရန်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ကွန်ဒုံးများပါ ၀ င်ပါက၎င်းကိုတင်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုအချိန်အများစုကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချဖို့အတွက်ငါအမြဲတမ်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြန်သွားပြီးခက်ခက်ခဲခဲရလိမ့်မယ်၊ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုမိန်းကလေးအားဆွဲဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်စေသည်။ ငါကော်ဖီခွက်ကောင်းကောင်းမသောက်၊ အာဂျင်နီယမ် (butea superba) သို့မဟုတ်မက္ကာ (အချို့) သောက်ပြီးမှတစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုလုပ်ပါက boner ဆေးလုံးအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံတွဲတစ်တွဲကိုသူမနှင့်အတူဖျော်ဖြေဖို့ငါ့ရဲ့ဝက်ဘ်ကင်မရာနဲ့ PMO အစည်းအဝေးတွေကိုပတ်ပြီးငါ့အပတ်ကိုစီစဉ်နေသလိုပဲ။
Porn Quit နှင့်လုံးဝသင့်အသက်တာပျက်စီးမလုပ်နည်း လိင်တူကောင်လေးသည်သူ၏ porn-သွေးဆောင် ED ဖော်ပြသည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်လကကျွန်ုပ်သည် porn ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး PMO ဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ငါ "အစွန်းရောက်" သို့မဟုတ် fetishist အမှုအရာသို့အရှိန်မြှဘယ်တော့မှမ။ သို့သော်ထိုအရာများရှိသော်ငြားကျွန်ုပ်သည် copulatory impotence“ porn-induced ED” (သို့) desensitization) စသည်တို့ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါတကယ်အိပ်မောကျပြီးအဲဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာအရမ်းကောင်းတဲ့ညနေခင်းတစ်ခုရှိတယ်။ ငါမျက်လုံးချင်းကိုင်ပြီးပြုံးနေတယ်။ ဒီလိုမျိုးနေ့တွေကဒီဟာကလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုသိစေတယ်။ ဒါ့အပြင်ငါအမြဲတမ်းရေးသားဖို့ကိုချစ်၏။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းငါရူးသွပ်သူတစ် ဦး အနေနှင့်ရေးသားခဲ့သည်။ ငါစီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီးငါဖန်တီးခဲ့သည့်အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူတယ် ဒီဟာကို PMO မှာမဖြုန်းတီးတာကနေငါရရှိခဲ့တဲ့စွမ်းအင်အပိုတွေပဲဖြစ်တယ်။
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အခွအေနေပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ, porn နှင့် ED အကြားဆက်စပ်မှုကိုရှင်းလင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ED ကကျွန်တော့်ကိုဘယ်နေရာကနေရိုက်ထုတ်ပြီးငါ့ရဲ့စိတ်ကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောလက porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးနောက်အရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဟုကျွန်ုပ်ဝမ်းသာမိပါသည်။
ငါ porn ကိုငါ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းငါ့ထံသို့သက်သေပြရာအလားတူဇာတ်လမ်းရှိသည်။ အကြောင်းတစ်ပါတ်အကြာဈနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်အလွန်ဆွဲဆောင်ခဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဝှမ်းထားပါသည်ခဲ့သည်ကြီးမားတဲ့ခြောက်သွေ့သောစာလုံးပေါင်းပြီးနောက်။ ကျနော်တို့ထွက်အောင်ခဲ့ကြပေမယ့်ကျွန်မသူ့ကို tits အပေါ်စို့နှင့်သူမ၏နည်းနည်းလက်။ သူသည်ငါ့ဒစ်ပွတ်ပြီးခြောက်သွေ့ငါ့ကို humped နှင့်ဈသူမ၏ tits ဆှဲပေမယ့် ကိုယ့်ခက်အပြည့်အဝရတယ်ဘယ်တော့မှ long- 40 မိနစ်အကြောင်းကိုဒီတစျခုလုံးကိုအပိုင်းတစ်လျှောက်လုံး။ ငါ porn ကိုကြည့်တဲ့အခါငါချက်ချင်းရလာတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမနဲ့အတူငါစိုက်ထူတာတစ်ဝက်လောက်ကိုသာစီမံနိုင်ခဲ့တယ်။ သူမကကျွန်မရဲ့ငပဲကိုပွတ်တိုက်နေတုန်းသူမရဲ့ tits တွေကိုဖမ်းဆုပ်နေလို့ပဲ။ ငါဆယ်ရက်တကြိမ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုရှိပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုနေ့စဉ်ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်လှည့်စားမတိုင်မီတစ်ရက်ကိုယ့် porn မှပယ် jacked; ကျွန်ုပ်သည် ၉၈% ရာခိုင်နှုန်းသေချာသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုနေ့ကိုမပိတ်မိလျှင်၊ porn ကိုအကြာကြီးမကြည့်ပါကအနည်းဆုံးဘီလီယံဘီလီယံအထိအမှတ်ပေးလိမ့်မည်။
ငါဖတ်နေတဲ့စာပေထဲကအကောင့်တော်တော်များများကလူတွေဟာအစစ်အမှန်ချစ်သူတွေကမဖွင့်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ငါတကယ်လိင်ဆက်ဆံဖို့အလားအလာအားဖြင့်ငါ့ကိုမဖွင့်ကြောင်းပင်မဟုတ်ပါ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအယူအဆနှစ်ခုလုံးသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ ဒါကလုပ်ရပ်မှာငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ အဲဒါကိုရဖို့အတွက်မစဉ်းစားဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတုန့်ပြန်ရန်အစစ်အမှန်ကိုမဟုတ်ဘဲတုန့်ပြန်ရန်လေ့ကျင့်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါကအဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့လား။
I ငါ 23 ခဲ့ကတည်းကမကြာခဏ porn မှ masturbating ထားပြီးတဲ့ 14 နှစ်အရွယ်အထီးဖြစ်ကြောင်းကို။ အရာအားလုံးငါ porn မှ masturbated သောကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်ထားတဲ့အတွက်အနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့သည်အထိဒဏ်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအချို့သိသိသာသာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြဿနာကိုသတိထားမိလာတယ်။ ငါအချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်ခက်ရနိုင်ပေမယ့်စိုက်ထူနေတုန်းပဲ (တစ်ဦးတည်းနှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး) မျှမျှတတအားနည်းနေလိမ့်မည်။ ငါထို့နောက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပျက်ကွက်တက်အဆုံးသတ်ကတည်းကတနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံကြိုးစားခဲ့ပြီအကြိမ်အနည်းငယ်။ ငါဖြစ်စေအလုံအလောက်ခက်ရမဟုတ်ဘူး, ဒါမှမဟုတ်ငါလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်, ငါသည်လိင်တစ်ဦးတစ်မိနစ်အတွင်းဖြစ်ချင်လိမ့်မယ်။
Wow, အရမ်းဝမ်းသာတယ်ငါထင်ထားသလိုf* cked-up ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ များစွာသောနည်းတူဘိရှော့ကိုတစ်နေ့ ၁ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်အကြားအလွယ်တကူခုတ်ထွင်နိုင်သော်လည်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်အခါ (ပုံမှန်အားဖြင့်သူမအပေါ်ကျွန်ုပ်သွားနေစဉ် - ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုဖွင့်ရန်) မတည်မငြိမ်စေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည် ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ခိုင်မြဲစွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်တွန်းအားပေးသည်။ ) တကယ်တော့ငါဟာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဘယ်တော့မှတကယ်မလိုချင်ခဲ့သလိုငါ့ရဲ့ဒီယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ငါနောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးကိုပြိုကွဲစေခဲ့သူ။ ငါ့ကိုယ်ပိုင် * ပုံသဏ္*ာန်အတွက် * မရှိခြင်း၌တည်၏။ ငါဆိုလိုတာကသူမဟာ * အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သူပါ။ ငါအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေတဲ့ကြက်တွေလို - ငါ GF လိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ ဒါပေမယ့်တကယ့်ဘဝဗားရှင်းနဲ့မတူဘူး။ ဒါဟာ MAD ပဲ! ယခုငါရပ်တန့်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အလုပ်ပြီးနောက်ကွန်ပျူတာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ရိုက်နှက်ပြီးအဝတ်မပါသောကြက်များကို ၂-၄ နာရီခန့်ကြည့်ရှုနေစဉ် (၎င်းသည်ညစဉ်ညတိုင်း) အခွံမာသီးတစ်ခွက်နှစ်ပင်ကျိုးပဲ့နေသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်အရှိန်ကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုကာလအတွင်း။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နှစ်တာကာလအတွင်းနေ့စဉ်ပုံမှန်အတိုင်းလှည့်လည်သွားလာလှုပ်ရှားနေခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချည်းနှီးဖြစ်ခြင်းကိုခံစားနေရပြီးဖြစ်သည်။ ဒါခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါအကောင်းဆုံးရိုက်ချက်ပေးပါလိမ့်မယ် !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ငါ 53 က y / o လူကိုဖြစ်၏။ ယနေ့တွင် PMO မပါဘဲ 28 ရက်ပေါင်းခြေတစ်လှမ်း !! လူအများစုလိုပဲ၊ ငါဟာအမြဲတစေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့အမြဲတမ်းပြaနာရှိနေတယ်။ ဘာမှသိပ်အရေးမကြီးဘူး၊ ဒါပေမယ့်နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာလူတွေဟာလိင်ဆက်ဆံတာကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ရသည့်အချိန် ၁၈ လခန့်ကပြနာတက်ခဲ့သည် ရုတ်တရက်ဆိုသလို၊ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းမှဗီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုချက်ချင်းအွန်လိုင်းကြည့်ရှုခြင်းသို့သွားခဲ့သည်။ တစ်ခါမှတော့နာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးရင်တောင်မှငါ့ရဲ့ဇနီးနဲ့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ဘဝပြောင်းလဲမှုကိုသတိပြုမိလာတယ်။ ငါဘယ်တော့မှ ED ပြသနာမရှိခဲ့ဘူး။ အားလုံး။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်လိင်စပြုလာတဲ့အခါငါစိုက်ထူလို့မရဘူး။ တခါတရံငါကတ ဦး တည်းရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူကလျင်မြန်စွာပျော့ပျောင်းစတင်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလိင်ဆက်ဆံဖို့နီးပါးမရှိသေးပါ။ ကျွန်တော့်ဇနီးကကြင်ကြင်နာနာရှိပြီး“ ဒါကောင်းပြီ” လို့ပြောတယ် အိုးနှစ်သိမ့်မှု ... နီးပါး !!
ဒါကြောင့်မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ၊ ငါဟာ“ အကြိုက်ဆုံး” porn site ကိုသွားပြီးဗီဒီယိုကလစ်တွေထပ်မံကြည့်ရှုရင်းဒီ site ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ “ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က Porn” ဗီဒီယိုစီးရီးကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အခြားပို့စ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုလမ်းခင်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၌သွေးဆောင်မှုအချို့ရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဤနေရာတွင် ဦး စွာရပ်တန့်ရန်နှင့်စာမူအသစ်ကိုဖတ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အားအာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်အတွက်အဟောင်းကိုပြန်လည်ဖတ်ရန်သေချာစေရန်အမြဲတမ်းသေချာပါစေ။ ဒီနေ့မနက်ငါအားကစားဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရှိနေတယ်၊ ​​နဖူးစည်းစာတန်းတစ်ခုထဲကမိန်းကလေးတစ် ဦး ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို - နဖူးစည်းစာတန်းတစ်ခုမှာ - အချိန်ကြာမြင့်စွာပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့၊ ငါ့လိင်တံဟာစိုက်ထူမှုဆီသို့ ဦး တည်ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ။ ဒီတော့ဒါကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းသွားတာပေါ့။ ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်၊ ငါ ၉၅% သောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရင်တောင်ငါစိုက်ထူလို့မရဘူး !! ဗွီဒီယိုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်တောင်ကျွန်မရဲ့လိင်တံဟာဘယ်တော့မှမထနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဟေ့ယောက်ျားတို့၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဆက်ပြီးအားပေးကူညီကြပါစို့။ ခင်ဗျားတို့ထဲကတစ်ယောက်မှကျွန်တော်မသိပေမယ့်ခင်ဗျားရဲ့အားပေးစကားကကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။
I ပထမဆုံးအကြိမ်သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ (နီးပါးလေးလအကြာ) ။ ကျနော်တို့မကြာမီကထွက်မသွားဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမပခုံးပေါ်ငါငိုခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူမပြောတာတွေ၊ အရမ်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးအရာအားလုံးကိုသူအရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒီပုံမှာဘာမှမမှားခဲ့ပါဘူး သူမနှင့်အတူငိုနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်ရှက်ရွံ့စွာမခံစားခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အစဉ်မပြတ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ့စွဲလမ်းမှုမှာဒီကိစ္စကပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ အဲဒါအတွက်ငါကျေးဇူးတင်ရမယ်။ နောက်တာပါ။ ငါကငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံးကိုအားလုံးကိုပြောတယ်၊ မင်းလုပ်ရင်ချက်ချင်းသက်သာလိမ့်မယ်။ သင်အမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်လျှင်အရာရာကိုသည်းခံနိုင်လိမ့်မည်။ ယုံကြည်ပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၅ လကပင်ဤခြေဆွံ့သောစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောစကားကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မပြောနိုင်ခဲ့ပါ။
ငါအသက် ၃၀ ကျော်ပြီ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသုံးခဲ့တယ်၊ ED ပြproblemsနာတွေလည်းကြာခဲ့ပြီ - အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အသက် ၂၀ ကျော်ကတည်းက၎င်းသည်စုစုပေါင်း ED copulatory ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပေါ်အပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်သည် (“ မင်းကိုငါမစွဲမက်သေးဘူး” /“ မင်းကိုပိုပြီးတုန့်ပြန်မှုရှိစေချင်တယ်”)၊ မိတ်ဖက်များ၏အသစ်အဆန်း (“ ငါ့ ဦး နှောက်ကိုဖမ်းစားရန်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအချိန်ပေးရန်လိုအပ်သည်”) ။ , ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်ဆင့်, အစားအစာ, အသက်, စိတ်ဖိစီးမှု, စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု။ တကယ်တော့ "ငါကမင်းကိုမင်းမရှိဘူး" ဆိုတဲ့အချက် မှလွဲ၍ သူတို့အားလုံးကပါဝင်ဖို့ရှိနိုင်တယ်။ ငါ porn မပါဘဲအော်ဂဇင်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါတစ်ခုခုနှိပ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်ယခုအခါမျက်မမြင်ဖြစ်နေပုံရသည်။
ငါစနေတနင်္ဂနွေကောလိပ်မှာအတန်းတွေတက်ပြီးထိုင်နေတုန်းအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေမှာငါ့ရည်းစားကိုမတွေ့တော့မှာကိုငါကြောက်တယ်။ ငါ ED ကိုတစ်ချိန်လုံးစိတ်ပူခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုတကယ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ တကယ်တော့သူမနဲ့အတူငါအိပ်နေချိန်မှာကျွန်မရဲ့လိင်တံဟာ tic-tac အရွယ်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်၊ ဘယ်အခိုက်အတန့်မဆိုသူမဆီကနေချဉ်းကပ်လာနိုင်ခြင်း မှလွဲ၍ ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ပါဘူး။ အကောင်းတစ် ဦး အစိုင်အခဲစိုက်ထူခြင်းနှင့်အစားရှာပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အချိန်ကာလထက်ပိုပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးတာမျိုးတစ်ခါမှမခံစားခဲ့ဖူးဘူး။ Tt ရဲ့ကတည်းကပိုကောင်းလာပြီ။ ဒါပေမယ့်ဒါကတကယ့်ကိုထူးဆန်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မတို့လုံးဝလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပြ,နာအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနိုင်မယ့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှာ (အဓိက) သော့ချက်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ငါထပ်တူထပ်မျှပြfromနာများခံစားခဲ့ရပြီးဘာလုပ်ရမှန်းစဉ်းစားမိသည်။ ငါ့ကိုအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြရန်, ငါ ၂၃။ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၈ နှစ်မှာလိင်ဆက်ဆံဖို့ပထမဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမထနိုင်ခဲ့ဘူး (ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ် ၆ နှစ်ခန့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလေ့ရှိသည်၊ များသောအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားသောပုံရိပ်များဖြင့်) ကျွန်တော့်ဘဝမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လေးယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးသူတို့ထဲကတစ်ယောက်နဲ့မှအော်ဂဇင်မရောက်ခဲ့ဘူး။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးသည်ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများကြောင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုလိင်တူချစ်သူလို့စွပ်စွဲပေမဲ့အဲဒါကမှန်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမကိုသူမစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံပေါက်နေရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲ။
ငါတော်တော်များများကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဒီအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကပြtheနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်သူတို့ကအရမ်းစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကအန္တရာယ်ကင်းပြီးကျန်းမာပုံကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်သံသယရှိခဲ့ဖူးသောအရာများကိုနောက်ဆုံးတွင်အတည်ပြုပြီးသောနောက်ဆုံးတွင်သမားရိုးကျဉာဏ်ပညာကိုဆန့်ကျင်ရန်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများတွင်တစ်ယောက်တည်းခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာကလူသိများသည့်ဇာတ်ကြောင်းကိုဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်၏အသက်အရွယ်သည်ယောက်ျားများသည်လိင်မဆန်သောကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သူတို့၏လိင်စိတ်ကိုဘယ်သောအခါမျှအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ငါကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားသောထုံးတမ်းစဉ်လာကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။ သူတို့၏ပြissuesနာများသည်စာနာခြင်းထက်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းထက် ပို၍ ခံထိုက်သည်။ အမှန်စင်စစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလူကြိုက်များသောမီဒီယာများတွင် ၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောသို့မဟုတ်စာနာတတ်သူအဖြစ်တစ်ခါမျှမဖော်ပြပါ၊ ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကကျွန်တော့်ကိုအတော်လေးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေပြီးဘဝကဏ္ aspect တိုင်းမှာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုပိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာမတွေ့နိုင်တာကြောင့်ငါမျှော်လင့်ချက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုချဲ့ကားပြောဆိုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ငါအသက် ၂၀ ကျော်နေပြီ၊ ငါမှတ်မိနိုင်သလောက် ED ရှိပြီ။ ငါသည်လည်းအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည် - ငယ်ငယ်ကတည်းကအချို့သောအရာများကကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရသည်၊ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားပြီးကျွန်ုပ်သည် 'ပြီးပြီ' ဟုပြောခြင်းကိုပင်မသိခဲ့ပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံပေါက်နေတဲ့အင်တာနက်ခေတ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာညစ်ပတ်ပေရေနေသလိုဘဲရေထဲကိုဘဲဘဲသောက်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်များနှင့်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ဖူးပြီး၊ ထပ်ခါထပ်ခါ
ဒါပေမယ့်ငါမှာရောဂါရှိနိုင်တာကိုမျှော်လင့်ဖို့နောက်ခံရောဂါရှိတာသိချင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးတွင် Viagra (သို့) Levitra (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အယုံကြည်ရဆုံးဖြစ်သည်) ကိုအမြဲအားကိုးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အကြွင်းမဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်မဟုတ်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုနှစ်မတိုင်မီကအလားတူသတင်းအချက်အလက်အပိုင်းအစကိုတိုက်မိခဲ့သော်လည်းတစ်နည်းနည်းဖြင့်သူ့ဟာသူမမြှုပ်နှံခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်တစ်နေ့လျှင် ၁-၃ ကြိမ်မျှမတူကွဲပြားသောဗွီဒီယိုများနှင့်အတူမြင်ကွင်းမျိုးစုံဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။ ငါ၏အ insatiable အလိုဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့ရုန်းကန်။
တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ရန်နာရီများစွာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရသည်။ ဥပမာ၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်အလုပ်ဖြစ်သည်၊ သန့်ရှင်းရေးသည်စိတ်မချရ၊ မြို့သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အားစိုက်ရပြီးအချိန်များစွာယူရသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတစ်နေ့လုံးတောင်နာရီဝက်လောက်ရှာဖွေပြီးမှားယွင်းတဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။ အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်း - ငါလိုချင်သလိုအမြန်သုက်လွှတ်ခြင်းကဲ့သို့။ ပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတစ်ရက်လုံးကုန်သွားတယ်။ တောင်မှငါ့စိုက်ထူမှုဟာ ၁၀၀% မဟုတ်၊ ၇၀-၈၀% ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါ 100% အပြည့်အဝရတဲ့အခါငါကံကောင်းခြင်းကိုမယုံနိုင်ဘူး၊ ငါလိင်တံနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုနဲ့မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ဆီသို့ ဦး တည်စေနိုင်တယ်။ ဤသည်နေဆဲကိစ္စတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများသည် Viagra သို့မဟုတ်အလားတူဆေးများကိုကမ်းလှမ်းခြင်း မှလွဲ၍ အခြားဇီဝကမ္မဗေဒဘက်မှအဖြေမရှိပါ။ ဒီမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ငါ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အနည်းဆုံးကြိုးစားကြည့်သင့်သည်။ ငါပုံမှန်အလုပ်လုပ်တဲ့လိင်တံတစ်ခု godsend ဖြစ်လိမ့်မယ်အဖြစ်ဤသည်ငါ့ပြproblemနာဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်!
porn နှင့် ED အကြားဆက်နွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက် ပို၍ ရှင်းလင်းစွာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါဤသံသရာကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ - လိင်မပျော်အောင်၊ အငြိုးအတေးပြုခြင်းကိုရပ်ရန် (သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ) -> - porn ကိုအရှုံးပေးပါ -> - ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ထူမှုများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ကိစ္စမှပိုမိုပျော်ရွှင်မှုရယူပါ၊ -> - porn သို့ပြန်သွားပါ။ > အဆင့် ၁ သို့သွားပါ။ ခက်ခဲသောအချိန်များ၊ ကျွန်ုပ်သည်အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လျှင်ပင်ထိုခံစားချက်သည်မရှိခဲ့ပါ။ ငါမပျော်တော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ကိုပြန်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်လို့ပဲ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိုတယ်ဆိုတာအခုငါတွေ့ပြီ။ အော်ဂဇင်အားလုံးကိုခဏရပ်တန့်ပြီးပြန်လည်ချိန်ညှိပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယူပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ဖိအား
ငါ 24 အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုယခုနှစ်ပေါင်း ED အပြင်းအထန်ပြီသာမကြာသေးမီက porn စွဲဖို့ကစွပ်စွဲ။ ငါပြောတာကငါဘာပြwhatနာလဲဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားနေရင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ roller coaster တစ်ခုမှာရှိခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးကိုဒီလောက်ခက်ခဲအောင်လုပ်တဲ့အရာကခင်ဗျားကို“ စစ်မှန်သော” အမျိုးသမီးများကနှိုးဆွသင့်တယ်ဆိုတာကိုမင်းသိတယ်၊ ထိုအခါသင်သည်သတိရှိရှိဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆွရန်ကြိုးစား။ အခြေခံအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်။ ၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း / စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသို့မရောက်ရှိသွားပါက ဆရာဝန်များသည်ဤအရာနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအရာကိုပိုမိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
ငါကိုယ်တိုင်“ တကယ့်မိန်းမ” အခြေအနေနှင့်ငါ့ ဦး နှောက်ကို“ ဝါသနာ” ခြင်းကဲ့သို့သောပြsameနာများရှိနေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုခံစားခဲ့ရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဤ porn / masturbation အပြုအမူကိုစတင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါတကယ်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါမှာ ED ရှိခဲ့တယ်။ တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ။ စိတ်ပျက်စရာ။ သူမအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောသူဖြစ်သည်။ သူသည်ငါ porn porn ဖြင့်ရှာဖွေခဲ့သည်။ နေ့စဉ်တိုးတက်မှုဖြင့်“ reboot” လုပ်ငန်းစဉ်ကိုငါစတင်ခဲ့သည်။ ပထမ၊ ရုပ်မြင်သံကြားမှအခြေအနေဆိုင်ရာလိင်အစီအစဉ်များ (ဥပမာ Showtime, HBO, Family Guy သို့မဟုတ် Simpsons) ကိုပင်ရုပ်သိမ်းပါ။ ထို့နောက်သင်၏ system တစ်လျှောက်လုံးသွေးကိုစုပ်ရန်အားစိုက်ထုတ်ပါ။ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုပါက porn မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆွရန်ယောက်ျားမိန်းမတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုပါ။ ဖြည်းဖြည်းပြန်လာလိမ့်မည် ဒါကငါနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ် ငါရှိသည်တစ်ခုတည်းသောပြissueနာကြိုတင်ပျက်ကွက်မှုကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကတုန်လှုပ်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါသိကတည်းကပြန်ကောင်းလာမယ်။
ငါပြည့်တန်ဆာနှင့် ပတ်သက်. program တစ်ခုကိုကြည့်ခဲ့သည်အခြားညဥ့်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေထဲကနေမိန်းကလေးအချို့ကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ငါကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လိင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်မိန်းကလေးငယ်များ, ငါကအနည်းဆုံးတစ်ဦး nonjudgmental ဖက်ရှင်အတွက်ရှားပါးသည်ထင်တစ်ခုခုကနေရှုထောင့်ရဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, သူတို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနာတာရှည်ညစ်ညမ်းတဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသူတို့ပြောနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။။ ပညာရှင်ပီသစွာအထီးလိင်စိတ်ကူးယဉ်ကျေပွန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပင်မိန်းကလေးတွေအမှန်တကယ်နေသောအချို့သောမိန်းကလေးများအပါအဝင်ညစ်ညမ်း၏ဆွကိုက်ညီနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း, စဉ်းစား in ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခင်မှုကိုသာလိုလားသော“ သာမန်” အမျိုးသမီးများသည်အခွင့်အရေးမရကြပါ။
ငါနင့်ကိုများလွန်းတဲ့အခက်အခဲတွေအတူတူပဲ။ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရလို့စိတ်သက်သာရာရတယ်။ ငါ ၁၃ နှစ်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အကျင့်ဆိုးကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်၊ မတူကွဲပြားသောအမျိုးသမီးများနှင့်တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုပြုလုပ်သောအခါငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်လကြာရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ၃ ပတ်ကျော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမလုပ်ပါ။ သူတို့ကိုငါမလွမ်းတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုနေထိုင်ဖို့ငြင်းဆန်လို့ပဲ။ ငါဟာမိန်းမတွေကိုမကြာခဏကြည့်လေ့ရှိတယ်။ အရင်ကငါနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး၊ ကျွန်မရဲ့လိင်တံဘေးမှာညင်ညင်သာသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဘဲငါတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားလေ့ရှိတဲ့အထက်ပိုင်းကိုမထိပါဘူး။ ငါအထွcl်အထိပ်နီးကပ်သည်မဟုတ်။
ငါနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိနေသူတစ် ဦး ရှိသည်။ သို့သော်သူသည်နိုင်ငံခြားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမမထွက်ခင်ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှုပ်ထွေးခဲ့ပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ဘာလိင်၌ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မထိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါယခုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တောင့်လာပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာတွန်းအားကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကဲ့သို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခံစားရတတ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာပျောက်အောင်ကုသရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊ အခြေအနေတွေကကောင်းနေပြီ။
ကျနော်ကျိန်းသေဤဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီ၊ ကောလိပ်အားကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်ပါ။ အကြှနျုပျ၏အခွအေနေကိုအခြားသူများအဖြစ်အစွန်းရောက်အဖြစ်ပါပြီမဟုတ် MY, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လျှော့ချတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ abstinence ကျိန်းသေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED နှင့်အတူကူညီပေးသည်။ အဆိုပါတိုက်တွန်းလွန်းကြီးစွာဖြစ်လာသည်လျှင်, ငါပိုကောင်းခံစားခဲ့ရနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူအိပ်ရာပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကသင်၏ head.After အတွက်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ masturbate ။ porn အစဉ်အမြဲငါအပေါ်မှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်တယ်, ငါသောက် cigs နှင့်ပေါင်းပင်ဆေးလိပ်သောက်လေ့ရှိတယ်။ ကိန်းဂဏန်းသွားပါ။
အစဉ်အမြဲငါကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်းစားကတည်းက ED အပြင်းအထန်ပြီ။ က 17 နှစ်အရွယ်များအတွက်ဖြစ်သင့်ဘယ်မှာတောင်မှသူမ၏နဲ့ငါ့လိင် drive ကိုကျိန်းသေမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အစဉ်အမြဲငါ့ထံသို့အတန်ငယ်ပျင်းစရာဖြစ်ရပြီသောနောက်မိန်းမနှင့်မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး။ ငါရှိသင့်သကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှား get ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ကျွန်မသိပ်ကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက porn မှ masturbating ပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့မိသားစုကတည်ရှိစဉ်အဆက်ကတည်းကအင်တာနက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလွန်ငယ်ရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်ငါအချိန်တွင်ကစားကာညစ်ညမ်း website တွင်မတော်တဆထိ မိ. လဲခံခဲ့ရကာဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း website တစ်ခုအဘို့အဝဘ် surfing ခဲ့သည်။ အစဉ်အဆက်ဒါဆိုကတည်းကငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့စွဲပြီ။
ကျွန်ုပ်၏ ED ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သော်လည်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။ ငါနံနက်စိုက်ထူပုံမှန်ရတယ်ဒါကြောင့်ငါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာမဟုတ်ခဲ့သိတယ်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အသက်နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံရန် (သို့) တစ်ယောက်နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရန်လုံးဝလမ်းမရှိတော့ပါ။ ဒီဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနားမလည်နိုင်ဘူး။ ငါ porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါလုပ်သောလမ်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းလိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိရမည်ဟုခံစားခဲ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ပြissuesနာများကိုအလေ့အကျင့်တစ်ခုခုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းတို့သည်ယောက်ျားများလုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အမြဲထင်မြင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်အပြာစာပေနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းနေခြင်းကကျွန်ုပ်၏ ED ကိုအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူနေလိုသောဆန္ဒမရှိကြောင်းလုံးဝယုံကြည်မိသည်။
ငါဒီမှာထိုင်နေတုန်းဒီအရာအားလုံးကိုရိုက်နှိပ်နေစဉ်ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးစွဲလမ်းမှုကကျွန်တော့်ကိုအလွန်စိတ်သောကရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဘဝမှာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ ငါဒီအကျင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ငါမချိုးခင်တစ်ပတ်မှာအများဆုံးလုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ အဲဒါကငါအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီဟာကကျွန်တော့်အတွက်တော့အခက်ခဲဆုံးပဲ။ ဒီလောက်တောင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ ငါဒီဟာလူတွေထင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ပြproblemနာလို့ထင်တယ်။ လူငယ်များသည်သူတို့၏ဆရာဝန်များကို ED အကြောင်းသွားနေကြသည်၊ ငါအကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်သည်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုနီးပါးဖြစ်သည်။ ငါထင်မြင်ချက်အတိုင်းယောက်ျားတိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကြော်ငြာများနှင့်ကြော်ငြာများစွာကိုငါတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ အထူးသဖြင့်လူငယ်များအတွက်ရှက်စရာကောင်းသည့်ပြisနာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်သူမှမပြောချင်ကြပါ။ ဒီအချက်ကိုသိပ္ပံပညာကပိုပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်လို့ကျနော်ထင်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုငါမုန်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရခြင်းကနှစ်သိမ့်မှုပါပဲ။
I ငါ ၁၄ နှစ်ကတည်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်များကြောင့်ဤပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲအမြဲတွေးမိသည်။ medhelp.com ရှိဆရာဝန်များကိုပင်မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးကကျွန်တော့်ကိုရယ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကကျန်းမာနေတယ်၊
ကျွန်ုပ်၏အသက် ၃၀ အစောပိုင်း၌ရောက်နေသောဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက် porn သည်မကြာသေးမီကမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းမှုပြproblemနာကြီးထွားခြင်းနှင့် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်း၌အထက်တန်းကျောင်းတွင်အင်တာနက်ကိုပုံမှန်သုံးခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကလေးတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစောလွန်းနေလို့ပါ။ ညံ့ဖျင်းလွန်းသောလူငယ်များ! ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်တစ်နှစ်ခွဲခန့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအချိန်မတိုင်မီက၎င်းသည်ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ စစ်မှန်သောလိင်နှင့်ရံဖန်ရံခါရောစပ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အရမ်းအစွန်းရောက်တယ်ဘယ်တော့မှမ။ ပုံမှန်ပင်မအမာခံပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေမယ့်ဘယ်တော့မှလိင်တူချစ်သူလား၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ denier တစ်ယောက်လိုအသံမထွက်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့အတွက်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး။ ဒါဟာဟောင်းဆ g /fနှင့်အတူတစ်ခက်ကိုချိုးဖျက်ပြီးနောက်လုပ်ဖို့အလေ့အကျင့် / တစ်ခုခုပိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလိုမကြာခဏညစ်ညမ်းတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရင်အဲဒါကိုငါအရင်လုပ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အတ္တ / ခန္တာကိုယ်ထက်ဘာကပိုအရေးကြီးတာလဲ။ ငါကဒီအန္တရာယ်အတွက်တင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုငါအကျိုးဆက်များကိုငါသိ၏နောက်ငါပြန်သွားဖို့မဆိုင်းမတွမရှိဘဲလုံးဝရပ်တန့်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်သည် ၁၅ နှစ်အရွယ် မှစ၍ လိင်မှုကိစ္စကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့ပြီး ED ပြissuesနာများရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုသည်မကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကကျွန်ုပ်အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်အထိ၊ ယခုအချိန်အထိဤပြproblemsနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
PIED အပေါ်ဂေး input ကို
ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာ၊ ကွန်ဒုံးမသုံးနိုင်တာနဲ့ငါ့ရဲ့သမိုင်း (သို့) PIED ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ သူလည်းသူ၌ပြproblemနာရှိကြောင်း၊ သူကမတူကွဲပြားသောယောက်ျားများနှင့်မတူကွဲပြားသောယောက်ျား ၅ ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံမှု ၅ ခုခန့်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အချို့သည် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကြားသောအခါကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ခဲ့သည်။ “ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူး” ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကကျွန်တော့်ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးစေပြီး၊ သင်၏ဖုန်းများနှင့်ကွန်ပျူတာများကိုပိတ်ပါ၊ စကားဝှက်ကိုလွှင့်ပစ်ပါ၊ မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းမလောက်ပါ။ အထူးသဖြင့်အသက် ၁၂ နှစ်ကတည်းကစလို့ဒီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်။ ကံကောင်းပါစေ
ပြနာကသင်ဟာယာယီ ED ကသင့်ကိုဘယ်နေရာကမှမထိမရောက်မချင်းသင်ဟာပြproblemနာတစ်ခုဆိုတာတောင်မှမသိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်စကားလုံးကထွက်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်၊ ငါပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လမ်းပေါ်မှာရောက်နေပြီ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာသက်သာပြီးနေပြီ၊ မကြာခင်မှာပဲငါ့ရင်သွေးလေးတွေကိုပြန်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်။ နေ့၊ အစားအသောက်၊
ငါခဏတာမှာဒီပြproblemနာရှိနေတယ်။ ငါပြောနိုင်တာကတော့ငါဟာဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသွေးအပြည့်အဝလုပ်ပြီးပြီလို့ပဲဟော်မုန်းစစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ကောင်းမွန်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်နံနက်တိုင်းစိုက်ထူခြင်းနှင့်ပြည့်ဝသောကျန်းမာရေးအတွက်ရှိသောကြောင့် 'ထင်ရှားသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစေသောညစ်ညမ်းစေသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်မိသည်။
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ခန့်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာရည်းစားနှင့်အဆက်ပြတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်ကျသည့်အခြေအနေသို့ရောက်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကိုသီးခြားခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကို“ ဆန့်ကျင်မှု” အဖြစ် porn နှင့် masturbation ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုနာကျင်မှုတစုံတရာမှခံစားစေခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ခံစားရသောပြtheနာများကိုမရင်ဆိုင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ငါ "ထူသောအသားအရေ" ကိုတီထွင်လို။ အမျိုးသမီးများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုမခံစားရပါ။ ငါ့မှာနှလုံးကြီးလွန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါဟာလူတစ်ယောက်အတွက်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ ဒီစမ်းသပ်မှုကကံမကောင်းတာပဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လုံးလုံးငါမှာ libido နှင့် ED ပြissuesနာနည်းနေတယ်။
I (ကအထူးကုအပါအဝင်) သုံးဆရာဝန်များမှဖူး, ED meds သတ်မှတ်ထားသောပြီ (မယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသလောက်နည်းနည်းလေးနဲ့စတင်တာကို) ကျွန်တော်ဟာမလိုအပ်တဲ့စစ်ဆင်ရေးဖြစ်တဲ့ရေကျောက်ရောဂါကိုပြင်ဖို့ဓားအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီအရာအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ငါမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ငါဟာဆန္ဒနည်းနည်းပဲရှိပေမယ့် 'အသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးပါ' ဆိုတဲ့သီအိုရီကိုငါအရမ်းကြောက်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးကကျွန်တော့်ကိုမျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်ပေးပြီးသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာပြီး porn / masturbation ကိုရှောင်ပါလိမ့်မယ်။
I သငျသညျကဲ့သို့တူညီသောအခွအေနေ [ယခင်အစီရင်ခံစာ] ၌ရှိ၏, အနုတ်အဆိုပါ meds နှင့်ခွဲစိတ်မှု။ ညစ်ညမ်းတဲ့ကြက်ဆင်ကိုရပ်လိုက်ပေမဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမရပ်လိုက်ဘူး ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးခဲ့တယ်၊ ငါလည်းအတင်းအကျပ်မပြုခဲ့ဘူး။ ငါစိတ်ပြေလက်ပျောက်မနေခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်စိတ်ခံစားချက်ဖြင့်သာထိုအရာကိုမလုပ်မိပါ။ သင်ပုံမှန်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုအချို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်လာနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီပြproblemနာကိုတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒါကတကယ့်အရာပဲ။ ဤပြနာများအားလုံးသည်သင်၏ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ တွေးတောဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ နားလည်မှုရှိသောမိတ်ဖက်၊ အရက်နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ တစ်နေ့တာအတွင်းသူတော်ကောင်းတရားဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအသံသည်လှည့်စားခံလိုက်ရသည်။ ငါကြော်ငြာအခမဲ့ထုတ်လွှင့်ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ပေမယ့်ပစ္စည်းပစ္စယအလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံရသည်။ ဒါမှမဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာလဲ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာအသက် ၁၈ နှစ်မှာဘွတ်ဖိနပ်တွေခေါက်နေလို့ပဲ။
ဟေ့ဒီပစ္စည်းဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့လိင်ဘဝကျော်ကြောင်းရူးစဉ်းစားတွေးခေါ်သွားခဲ့ကြ (ဒါကတကယ့်ကိုစိတ်ငြိမ်သက်မှုရစေတယ်။ ) ဒါပေမယ့်ငါမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၅ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး ၁၂ နှစ်မှစ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောဗွီဒီယိုများအနေဖြင့်စတင်ခဲ့သော်လည်းမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည် ပို၍ အစွန်းရောက်သောအရာများကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက်အရွယ်အရစစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလောလောဆယ်တွင်မပြုလုပ်ရပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌အမှားပြုမိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်လိင်ဘဝပျက်စီးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ငါကဆိုးကျိုးတွေကိုအခုသိနေပြီး၊ မိန်းကလေးများနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်မျှော်လင့်မိသောကြောင့်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအခြေခံအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်အားရှင်းပြနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများဆက်လက်ပြုလုပ်သင့်သလားသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အကျင့်စရိုက်နှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
I တော်တော်များများကနောက်ဆုံး5နှစ်ပေါင်း porn ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးငါကငါ့အစိုက်ထူထိခိုက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြပြီ။ မကြာသေးမီကကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ချစ်စရာကောင်မလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေခြင်းသို့ရောက်သောအခါငါမစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ငါဖျော်ဖြေဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်တိုင်အောင်ဤပြanနာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါစဉ်းစားမိတယ်။ ငါ porn ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်သဘာဝစိုက်ထူမှုပြန်ရဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်ထက်ကြာကြာကြည့်မည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် ပို၍ ကြာနိုင်မည်လား။ ငါအင်တာနက်ပေါ်မှပူသောအမျိုးသမီးများကိုကြည့်သောအခါအိပ်ရာပေါ်၌မိန်းကလေးတစ် ဦး ထားခြင်းနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်သည်းခံစိတ်များလွန်းနေရ။ ၊
အခုကျွန်တော်အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့်အသက် ၁၀ နှစ်မှာ VHS တိပ်ခွေတွေသုံးပြီးကျွန်တော့်အမေနဲ့အဖေရုပ်ရှင်ကားကြည့်တုန်းကသူတို့ VCR ထဲမှာရှိနေတယ်။။ ငါကသူတို့အခန်းတွေကိုထပ်ရှာပေးတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကအပတ်စဉ်နီးပါးငှားရမ်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါထို့နောက်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ် ငါတကယ်အများကြီးနှေးကွေးဘူး။ အခုတော့ငါအင်တာနက်ပေါ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တယ်။ ငါကြည့်နေတာကြာပြီ၊ ငါနာနေပြီ၊ ငါအလွယ်တကူလိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး၊ ငါ Cialis သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ယေဘုယျပုံစံကိုအသုံးပြုရမည်။ ၎င်းသည်လုံးဝမအောင်မြင်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့အထိခိုက်မခံတဲ့အရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး၊ ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ရင်တောင်ဘာမှမခံစားရဘူး။ ဒါကြောင့်ငါထနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကြာရှည်ခံနိုင်တာပေါ့၊ ဒါကရှားတယ်။
ကောင်းပြီငါအပြည့်အဝယုံကြည်မှုနှင့်အတူ PMO ထံမှ abstinence သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ကန့်သတ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများထေူနိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီ၏ဤခွေးရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်ပြည့်ပြည့်ဝဝပိုမိုအားကောင်းလာပြီးအလိုအလျောက်ဖြစ်လာသည်။ ငါသည်ငါ့အပြည့်အဝလိင်ကျန်းမာရေးပြန်လည်ရရှိသောကြောင့်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏အသက်အရွယ်အစစ်အမှန်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ခံစားလွယ်မှုမျိုးကိုကျွန်ုပ်မခံစားရပါ။ ငါဟာလိင်စွမ်းအင်ပြည့်ဝတဲ့ဟော်မုန်းပြင်းထန်တဲ့အမျက်ဒေါသဖြစ်ပြီး၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မတိုင်ခင်ကတည်းကဒီစွမ်းအင်ကိုအသုံးချပြီးပိုမိုမျှတတဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုရယူပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုအကျိုးရှိရှိရိတ်သိမ်းခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရိတ်သိမ်းနေပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှု။ ဤဟောက်သံများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြissueနာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည် 'OMG! ဘုရားရေ! သင်ထိုင်ပြီးသင်၏ fav P ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုပါးရိုက်လိုက်လျှင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါက်ကွဲလိမ့်မယ်။ ' ငါတစ်ချိန်တည်းမှာငါနောက်မှမဟုတ်, ငါလုပ်ကြဖို့မတိုင်မီပေးကမ်းခြင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးဆက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်သောအခါငါပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်အမှန်တကယ်အလှည့်အလမ်းရှိခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်! ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာ kegel လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော့်တိုးချဲ့နိုင်တဲ့လှံတံရဲ့အလိုအလျောက်ကန့်သတ်ချက်ကိုတီထွင်ဖို့စိတ်ကူးရလာခဲ့တယ်။ ဤ Kegel လေ့ကျင့်ခန်းများသည် PC အတွင်းရှိကြွက်သားများအားယောက်ျားများအတွင်း၌အလုပ်လုပ်စေပြီး၊ ဖတ်ပြီးသည့်နောက်၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ အထူးသဖြင့်ရင့်ကျက်သောသန္ဓေတည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးရှိသည် (Me me tho) ။ သင်၏အကြံအစည်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားဒေသများကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်စဉ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်အလားအလာရှိသောလှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်ခြင်းသဘောဖြစ်သည်။ Blue Balls လို့ထင်တဲ့ testicular နာကျင်မှုကိုဂရုစိုက်ဖို့ဒီနေ့ဒီနေ့အချိန်မှာရေအေးကိုရိုက်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်မှမဟုတ်သောပတ်ဝန်းကျင်မှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နေ့ကိုဖန်တီးရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိခြင်းမှစိတ်ကျေနပ်မှုကိုများစွာခံယူမိသည်။
I ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး6လအတွင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဦးညစ်ညမ်းပြဿနာရှိခဲ့သတိပြုမိနှင့်တွေအများကြီးပြန်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်။ ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းကြည့်မယ့်အစား၊ တစ်ပတ်တစ်ခါတစ်ကြိမ်လျှော့ချပြီးအခြားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့အတူလျော့ကျသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မဟာတစ်လကျော်ကြည့်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခဲ့ဘဲတစ်ကြိမ်တည်းသာလေးကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလွန်တက်နှင့်ဆင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်တစ်ပတ်မှာငါလိင်တံစွမ်းအားမြင့်မားခဲ့လို့ ၃ ကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီသီတင်းပတ်နောက်ပိုင်းရက်သတ္တပတ်တစ်ဝက်အတွင်းမှာငါဟာခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူမှုတွေရနိုင်သလိုလိင်စွမ်းအင်လည်းမရှိခဲ့ဘူး။ ဒီဟာကစိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါဟာခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူမှုတွေပြန်ရနိုင်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တာကငါပျောက်ကင်းသွားတယ်။ လွန်ခဲ့သောလကကျွန်ုပ်၏လူမှုအပြုအမူတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ကိုသတိပြုမိသည်၊ သို့သော်အချို့ရက်များ၌လည်းသိပ်မများလှပါ။
I Men's Health တွင်ဖိုရမ်အကြောင်းအရာ (အမှန်တကယ်အနည်းငယ်) ကိုဖတ်ရန်မကြာသေးမီကအတော်လေးအံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ယောက်ျားများသည်လက်တွေ့တွင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဤ (porn / ED) နှင့်သူတို့၏ရုန်းကန်မှုများကိုဆွေးနွေးနေကြသည်။။ အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များ၊ အသက် ၂၀ ကျော်သူများမှာမိန်းကလေးတ ဦး နှင့် ထပ်မံ၍ မရနိုင်တော့ပါ၊ သူတို့အားလုံးသည်ပြင်းထန်သော porn / masturbation အလေ့အထရှိသည်။ ယောက်ျားများသည်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မည်သည့်အခါကမျှမြို့ပြင်မှရယ်မောသွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သူတို့အနေဖြင့်မည်သည့်အခါကမျှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမဆွေးနွေးပါ။ ဒါကအစစ်အမှန်ပါ ငါဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ပြီး ED လည်းပိုကောင်းလာရင်မင်းဆီပြန်လာပြီးမင်းသိအောင်ငါပြောပြမယ်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာ (၁) ဒီလူတွေဟာဒီအတွေ့အကြုံကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်။ ဘယ်နေရာမှာမတူညီတဲ့အနေအထားမှာရွယ်တူချင်းများကအိမ်မှာဖြစ်စေ၊ အလုပ်မှာဖြစ်စေမျက်နှာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောတဲ့အခါသူတို့ဟာဒီလိုမျိုးကိစ္စအတွက်ဘယ်တော့မှပွင့်လင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်မှာအလွန်ခက်ခဲကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ ၃) ဤကဏ္inတွင်သူတို့၏အလေ့အထ / လူနေမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်များမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ "အစစ်အမှန်" အိပ်ခန်း။
ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း (27yrs, အထီး) စောင့်ရှောက်မည်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကငါ ED ရောဂါလက္ခဏာတွေပိုဆိုးလာတယ်။ အသက် ၂၁ နှစ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြိုကွဲပြီးနောက်ကွန်ဒုံးပါဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပျော့ပျောင်းတဲ့စိုက်ထူမှုကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ၂၃ နှစ်လောက်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကွန်ဒုံးမရှိရင်တောင်စိုက်ထူမှုကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ သိပ်မကြာခင်မှာငါလပေါင်းများစွာချိန်းတွေ့ခဲ့သည့်အခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး အတွက်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် Viagra ဆေးပြားတစ်ဝက်ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်သူမနှင့်လုံးဝမပေါင်းသင်းနိုင်ပါ။ သူမကကျွန်မနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အခါကျွန်မဘဝကိုရိုးရိုးလေးဖြစ်သွားစေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်း၊ ဘာမှမငါအတွင်းပိုင်းဗလာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူးလို့ခံစားရတာအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ရင်းနှီးမှုသိပ်မရှိတာ။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီလိုမျိုးဖြစ်မလား။
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်း ဦး ရာသီကကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Viagra ဆေးပြားအချို့ကိုလျှို့ဝှက်စွာယူပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရှောင်ဖယ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ၆ လကြာပြီးနောက်ငါချစ်သောသူထံမှဖုံးကွယ်။ မရတော့ - သူမအားအရာရာအားလုံးပြောပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပိုပြီးထိခိုက်လွယ်တာမျိုးတစ်ခါမှမခံစားဖူးဘူး။ သူမကနားလည်တယ်၊ ငါ့ကိုချစ်တယ်၊ ငါတို့အတူတူအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ နှစ်ပတ်အကြာမှာသူမကကျွန်မနဲ့ပြိုကွဲသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီပြproblemနာဟာဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်ပြီ၊
အဲဒီအချိန်ကစပြီး (လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ ပတ်က) ငါအဲဒီအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ တိုင်ပင်မှူးမတ်တစ်ယောက်ဆီကျွန်တော်ချဉ်းကပ်လာတယ်။ ငါ (ဆဲလုပ်ရန်လိုအပ်သည်) နိမ့် testosterone ဟော်မုန်းများအတွက်စမ်းသပ်မှုရရန်မျှော်လင့်ဆရာဝန်ထံသို့သွား။ , ဒါပေမယ့်ငါ့ဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်၏အလေ့အကျင့်ဟာ ED အတွက်အဓိကပံ့ပိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူဖို့အံ့သြသွားတယ်။ ယနေ့ငါလေ့လာသင်ယူ ငါဒီ site ကနေ PMB စွဲစေခြင်းငှါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဆေးခြောက်နှင့် P to MB ကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးနေခဲ့ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံပိုများသော။
မြင်ကွင်းများသည်“ ရှက်စရာကောင်းလာ” သည်။ ပုံမှန် P သည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာမလုပ်ပေးနိုင်သည့်အထိဖြစ်လာသည်။ ငါ MB မပါဘဲ MB လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ပိုခက်ခဲသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများသည်အလွယ်တကူလွင့်မျောသွားသဖြင့်ငါ့ကိုအာရုံလွဲသွားစေသည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာဤအမှုကိုပြုခဲ့ ... ယခု။ ဒီ site နှင့် SUCCESS မှလူများသည်စိတ်ကျန်းမာရေးပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် P / MB မှရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ED ကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ယခုအအေးကြက်ဆင်ကိုလည်းစွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ ။ လက်ျာဒီအခိုက်အစ။ ဒီတစ်ခေါက်လုံးမှာ PMB ကိုစွဲလမ်းနေတာလားဆိုတာငါမယုံနိုင်ဘူး။ ဒီပြproblemနာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါသားကောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့ဆေးလုံးလိုအပ်အလွန်ငြီးငွေ့တယ်။ သူတို့ဟာမကျန်းမာဘူး၊ ပြhealthyနာကိုသာဖုံးကွယ်ထားတယ်။ တဖန်ငါဆက်ဆံရေးနှင့်ရငျးနှီးမှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်ချင်, ငါအဲဒီမှာရောက်ဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတာပါ။
It ကိုငါ၏အခွအေနအေအများဆုံးဆိုးရွားအကြားကဒီမှာလူသိများခဲ့ပြီးကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါရှင်းပြမယ်။ ငါအသက် ၁၈ နှစ်မှာ ED ရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရပ်တွေပါ ၀ င်ပြီးလူ ၃၁ ယောက်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိခဲ့တယ်။ ငါ ED အချို့ဒီဂရီရှိခဲ့သူတို့အားတွေ့ဆုံ 18 ယုံကြည်သည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကစုစုပေါင်း ED ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့အားတွေ့ဆုံအချို့သည်လူတို့နှင့်အတူရှိကြ၏။ ငါလျှို့ဝှက်ချက်လိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်သည်ထင်နှင့်ဤပြtheနာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်ယောက်ျားနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာငါမလုပ်နိုင်မှာကိုကြောက်လို့လိင်ကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်ကိုထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်၊ ငါဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကြည့်ကောင်း။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်အလွန်ရှက်ရွံ့။ မလုံခြုံမှုကြောင့်မိန်းကလေးများနှင့် (ဆက်သွယ်မှုအနည်းငယ် မှလွဲ၍) မည်သည့်ဆက်ဆံရေးမှမရှိခဲ့ပါ။ ငါမရှက်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံမရှိလို့မိန်းကလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတာကငါ့ကို ၂၉ နှစ်အရွယ်အပျိုစင်အဖြစ်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ အသက် ၃၀ မပြည့်ခင်မှာအပျိုစင်ဘ ၀ ကိုစွန့်လွှတ်ချင်တဲ့အတွက်эскортမိန်းကလေးကိုကျွန်တော်ငှားခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါကလုပ်, ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၏ libido နှင့်စိုက်ထူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိခဲ့ရသည် (porn သည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်) ။ ဒါပေမယ့်ငါဒီမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး ငါဒီနေ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းနှင့်ငါအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သူမရောက်လာပြီးကျွန်တော့်ကိုထိပ်ဆုံးမှာတင်ထားတဲ့အခါကျွန်မရဲ့လိင်တံဟာလုံးဝပျော့ပျောင်းသွားတယ်။ ငါတောင်မှရေချိုးခန်းကိုသွားဟန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အဲဒီမှာအနည်းငယ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပေမယ့်ဘာမျှမ။
ငါငှားရမ်းထားသောဤမိန်းကလေးသည်သူမ၏အလုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ သူမသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြံပြုချက်များရှိပြီးသူမအလွန်စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ အော်ဂဇင်တွေအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာသူမကဒီအလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူမအတွက်လည်းမွေးဖွားလာတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့သူမပြောခဲ့တယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးများကိုတည့်တည့်ကြည့်ပြီးအခြားတစ်ဖက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုခြယ်လှယ်နေစဉ် (၁၀၀% မဟုတ်) စိုက်ထူမှုရရန်နှင့်အော်ဂဇင်တစ်ခုရရှိရန်မှာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်မှာလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါသူမကျွန်တော့်လိင်တံကိုနို့စို့မစခင်တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုကြာမြင့်စွာယူ။ စိုက်ထူနောက်တဖန် 100% မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူမငါ့ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ထက်ငါကယ့်ကိုကောင်းသောအော်ဂဇင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အဆိုးဝါးဆုံးနှင့်အနှောင့်အယှက်ပေးဆုံးသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ စိုက်ထူခြင်းသည်သင်သိသည့်အတိုင်း၊ လိင်စိတ်စိတ်နှင့်လိင်တံကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည် - သို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်သည်။ ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုက်ထူခြင်းနှင့်သုံး orgasm ရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်! ငါလုံးဝလိင်စိတ်လှုပ်ရှားဘူး!
ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အခြားသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုတံတွေးထွေးခြင်းနှင့်ယခုဤအမျိုးသမီးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လှပသောလမ်းဖြင့်အလုပ်ထိုးနှက်ခြင်း၊ ညည်းတွားမြည်တမ်းခြင်းနှင့်မျက်လုံးများကိုကြည့်ခြင်း၊ ငါနာရီပေါင်းများစွာအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးများကိုကြည့်, အိပ်မက်မက်သူတို့ကိုနမ်းခြင်းနှင့်သူတို့ကိုထိ, ယခုပူမိန်းကလေးငါအိပ်ရာထဲမှာအဝတ်အချည်းစည်းငါဂရုမစိုက်ပါဘူး! လိင်အင်္ဂါထဲသို့ဝင်လိင်တံ၏ပုံရိပ်ကိုအမြဲအထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည် porn အတွက်ငါ့ထံသို့။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကဲ့သို့သောလိင်တံကိုတွေ့မြင်ရမည့်အချိန်တစ်ရက်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။ ယခုငါသူမသည်ငါ့ကိုစီးနေစဉ်သူမ၏လိင်အင်္ဂါထဲတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုကြည့်ပြီးထိုပုံရိပ်ကကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားစရာမဖြစ်စေခဲ့ပါ။ အမှန်တရား - သူမထိပ်ဆုံးရောက်နေတုန်းမှာငါတကယ်ကောင်းတဲ့အော်ဂဇင်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြောင့်ကျွန်တော်အံ့သြမိပါတယ် သူမကကျွန်တော့်အတွက်ဒီဆုံးမမှုတွေလုပ်ပေးနေစဉ်သူမသက်မဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလိုငါလုံးဝဝေးကွာစွာခံစားခဲ့ရတယ်။
I စိုက်ထူနှင့်အတူငါ (related တချို့ဖြစ်ကောင်း porn) ရှိသည်သတိထားကိစ္စများဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်အစဉ်မပြတ်ငါထင် "ငါတစ်ခု 65 get လျှင်ဟေ့ - တစ် screen ပေါ်မှာခြေဆွံ့သောသူကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့် 70% ရာခိုင်နှုန်းကိုစိုက်ထူသည့်အခါအချို့သောမိန်းကလေး, ငါသည်ခဲယဉ်းကျောက်လိမ့်မည် ။ ငါ့အလိင်တံနို့စို့စတင်သည် "ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမ! မိန်းကလေးပဲအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိမြင်ဖို့ porn site ပေါ်တွင်ကျသှားသောငါ၏အအစည်းအဝေးကျေးပြီးနောက်နေ့။ ငါအရင်ညဉ့်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ3orgasm ခဲ့ပေမယ့်, ချက်ချင်းနီးပါးတချို့ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်, ငါ့လိင်တံ stroking ထိုနောက်ငါတစ်ခုစိုက်ထူ (60 - 70%) လေမိနစ်တစ်ဦးအမှု၌ငါအော်ဂဇင်ခဲ့ကြတယ်! ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဖြတ်မသာ, ငါပုံရိပ်တွေကိုကြည့်စိတ်ပိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့။ မတိုင်မီနေ့အဲဒီပုံရိပ်တွေကိုမှန်ကန်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ထိုမြစ်၌ငါနှင့်ငါ့ excite ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အခုသူတို့လုပ်ပါ။ ရုပ်ပုံများငါ့ကို excite, အစစ်အမှန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလိင်မ။ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သနည်း နှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးသောကြောင့်ကုသပေးဖို့ဘယ်လောက်?
အိုကေဒီတော့ဒီမှာသွား။ ကျွန်မအသက် ၁၉ နှစ်နဲ့ ၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းကစပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ ငါအမြဲကြည့်နေတယ်၊ ​​ငါစွဲနေတယ်လို့ယုံတယ်။ မိန်းမတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတည်နေဖို့အထူးသဖြင့်သန္ဓေတည်ဖို့ခက်ခဲတယ်။ ငါဘယ်တော့မှမိန်းမအတွင်း၌သုတ်ရည်လွှတ်နိုင်စွမ်းဘယ်တော့မှနှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး များ၏ရှေ့မှောက်၌သုတ်ရည်လွှတ်အလွန်ခက်ခဲသက်သေပြခဲ့သည်။ ငါစာသားအမှန်တကယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရရန်ယုန် romping ၏အမြန်နှုန်းမှာသွားရမယ်, ဒါပေမယ့် porn ၏ရှေ့တော်၌ငါမိနစ်အတွင်းသုတ်ရည်နိုင်ပါတယ်။ ငါ porn မပါဘဲအရှည်ဆုံးငါ 11 ရက်ပတ်လုံးဖြစ်၏, ဒါကြောင့်မည်သူမဆို porn ကြည့်ရှုခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတားဆီးဖို့ဘာလုပ်ရမှန်းမဆိုအကူအညီတောင်းရှိပါဘူး။ မင်းရဲ့စောင့်ကြည့်မှုကိုရပ်တန့်သွားအောင်ငါပြောမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းပေမယ့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုတားဆီးဖို့ကွင်းဆက်ဆေးလိပ်သောက်ပြောတာနဲ့တူတယ်၊ မှန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီ, အကြံဥာဏ်စသည်တို့ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းကိုကြိုတင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Lewis က
[အခုတော့ 28 အသက်အရွယ်] ငါသည်ငါ၏နောက်ဆုံးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်အတူနှစ်နှစ်မုသာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ငါစာသား, နှစ်နှစ်, လိင်မတိုင်မီ (အွန်လိုင်းဝယ်) cialis နှင့် Viagra ၏ဆည်းပူးနေဖုံးကွယ်နှင့်အချိန်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာရူးသွပ်ခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏တစ်ဦးကရှုပျထှေးကို web ။ နောက်ဆုံးတော့အများဆုံးလူပျိုတို့နှင့်ဝသကဲ့သို့ငါပျင်းတယ်။ သူမအိပ်ပျော်စဉ် masturbate မှသကဲ့သို့ဤမျှလောက်, porn သို့အမှန်တကယ်မိုးသည်းထန်စွာသွားလေ၏။ မည်သို့တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး kinky အမာခံလုပ်ရပ်များလုပ်နေ HD ကိုညစ်ညမ်းကြယ်တစ်အဆုံးမဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်သနည်း ငါကဒီမှာသင်ကအများစုအလောင်းအစားကွဲပြားခြားနားသောညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများ၏ပွင့်လင်း 10 tabs များကဲ့သို့အရှိခြင်း, ဆက်စပ်နိုင်ပေမယ့်လုံလောက်စွာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောတစ်မြင်ကွင်းတစ်ခုရှာဖွေမတွေ့ရှိဘူး။ အမြဲတမ်းလည်းပြီးအောင်သောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေ။
ကောင်းပြီ, ED ပိုဆိုးတယ်။ ငါပြီးနောက်သူမ၏အတူကပယ်ကိုဖဲ့။ သူမ၏ယခင်နောက်ထပ်ဘယ်မှညာ၌ငါသာငါ့ကိုလက်အလုပ်အကိုင်များပေးခြင်း, ငါ၏ gf မှပယ်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ masturbating ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ငါယခင်က HJ fetish တီထွင်ခဲ့သည်။ သူမဟာတကယ်တော့စံပြအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ဆံရေးမျိုး၌ရှိသကဲ့သို့, porn လမ်းကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကိုးအထိပြုသောအမှုဖဲအတွင်းခံအဝတ်အစားအတွက်, ငါ့အိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းသူမ၏တချိန်ကကျော်ကြားခဲ့သောတစ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှတ်ဉာဏ်, ရှိသည်။ ကျွန်မသူမကြီးဘယ်လောက်လှကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်နှစ်ယောက်ယောက်ျားတွေငှက်ပျောသီးသွားပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်းငါမ arousal ခံစားရတယ်။ ငါတစ်ခုခုမှားသိတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို porn စွဲလမ်းသူလို့ဘယ်တော့မှမယူခဲ့ အချိန်မရွေးငါ Reddit အပေါ်တစ် ဦး post ကိုတွေ့မြင်, fapping မဟုတ်အကြောင်းကိုရယ်မောတယ်။ Fapping သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ရပ်တန့်ရမည်နည်း။ ငါသိပြီ fapping တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မကောင်းပါဘူး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ
တစ်စုံတစ်ဦးကအမှန်တကယ်ကလူ porn ကိုကြည့်ဖို့မရွေးကောက်သဖြင့်, masturbating ကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးမှတ်ချက်ရှင်းပြနှင့်ဆက်စပ် porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်, ဒီ subreddit အဖြစ်။ ငါ site ပေါ်တွင်အနည်းငယ်ဖတ်ရှုဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ဒါက "ဒါဟာ pseudoscience" နဲ့ "ဒီဟာငါနဲ့မတူပဲတခြားလူတွေအတွက်ပါ။ " ဒါပေမယ့်ငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာတစ်ခုခုနေသေးတယ်။
ဒါဟာငါ့ကိုအော်ဂဇင်မှအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာပါသည်။ ငါလက်တွဲဖော်ရှိတယ် ကျနော်တို့လိင်ရှိသည်။ ငါသူ့ကို fuck ဆိုတဲ့တောင်မှငါအမြဲ cum လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လေးနှစ်နီးပါးအတူတူနေခဲ့ကြရတယ်၊ သူကငါ့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ လေးကြိမ်တွင်တစ်ကြိမ်မဟုတ်။ ငါထင်တာကငါပဲဖြစ်မယ်၊ ထိုအခါမူကားငါကစဉ်းစားမိတယ်။ ငါ porn ကိုကြည့်တဲ့အခါငါအချိန်မရွေး, တစ်ခါတစ်ရံမိနစ် (စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း) cum နိုင်ပါတယ် ဆဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင်) အစဉ်အမြဲယူပါ။
အဲဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးစဉ်းစားမိတယ်၊ ပြီးတော့မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့ဖတ်ခဲ့တဲ့အရာများ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတကယ်ကိုငါ့ထံသို့လျှောက်ထားပါဘူးလျှင်ငါသိချင်။ ငါ "ငါစွဲဘူး, ငါအချိန်မရွေးရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်" ဟုပြောသည် ဒါနဲ့ငါလုပ်ခဲ့တယ် ငါနေ့စွဲသို့မဟုတ်ဘာမှမမှတ်ဘဲ, ငါနေဆဲငါ့ကိုသက်ရောက်မှုအဖြစ်မမြင်ရသောကြောင့် ငါကနှစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဖြစ်ရပြီထင်ပါတယ်။ ငါတောင်မမှတ်မိဘူး
ထိုအခါယနေ့။ ငါတကယ် porn အချို့ကြည့်ချင်တယ်။ ထိုအခါငါတကယ်စဉ်းစားမိတယ်။ ငါတကယ်ကြည့်ဖို့လိုသလား အဘယ်ကြောင့်ငါဤမျှမဖြစ်မနေခံစားရသလဲ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်တော့မင်းဟာမင်း porn ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်အချို့ဖတ်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ဒီစာမျက်နှာတွေပေါ်လာတယ် ငါဘာလို့ porn ကိုပိုပြီးထွက်ပေါက်ရှာရတာလဲ ... နှင့်ဤ porn ED စမ်းသပ်။ ထိုအခါငါငါ့ကိုခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ ငါတစ်ဖက်တယ်အထူးသဖြင့်မီ, porn နဲ့ငါ့သမိုင်းစဉ်းစားများနှင့်သဘောပေါက် ငါ porn စွဲဖြစ်ကြောင်းကို.
ငါသည်ငါ့သမိုင်း, porn နှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူရေးသားဖို့သွားခဲ့ပါသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအကြောင်းပိုမိုစဉ်းစား, ငါကနားလည်သဘောပေါက်ပိုဆိုး။ သို့သော်လည်းငါသည်အခြားပို့စ်အဘို့ထိုသိမ်းဆည်းပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
TL; DR ငါဒီနေ့ porn မကြည့်ခဲ့ဘူး
MY STORY !!! (ငါလုပ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်း)
ကောင်းပြီငါ့ပထမဆုံးစာကိုဖတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဝမ်းကွဲကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ ၇ နှစ်အရွယ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်မိတ်ဆက်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏မူးယစ်ဆေးဝါးအသစ်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည်။ ငါတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ရတဲ့အချိန်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အခွင့်အလမ်းလိုတစ်ယောက်တည်းရှိနေတုန်းမကြာခင်မှာပဲကွန်ပျူတာကိုညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ရှုလာတယ်။ ငါတစ်ပါတ် 7-3 ရက်ပေါင်းကဲ့သို့အဘို့ပြု! အဲဒါဟာပြaနာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ (၁၈) နှစ် (လက်ရှိအသက်) အထိကျွန်မဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ google ကျေးဇူးကြောင့်မှားတယ်လို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်လေးနက်သောပြproblemနာရှိသည် !!! (ကျပန်း) ငါ porn မပါဘဲ boners ရနိုင်တော့မည်, မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်ငါ့ရှေ့မှာရှေ့မှာအဝတ်အချည်းစည်းကွေးနှင့်ဘာမျှမပေါက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကငါ့ကိုလူတစ်ယောက်လိုခံစားမှုမခံစားရစေအောင်လုပ်ပေးတာဒါကြောင့်ငါဒါကိုလုပ်နေတာပဲ။ ဒါကငါကြားခဲ့ရတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ဒစ်ကိုဖယ်ရှားပစ်သင့်တယ်။ (သင်၏ခရီးများ၌ကံကောင်းပါစေ!)
3-4 အကြောင်းရက်သတ္တပတ်အကြာကနောက်ဆုံးငါ PMO ပြဿနာရှိသည်သောငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ အစဉ်မပြတ်ငါနေပါစေငါတစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်တစ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပါလျှင်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ပျမ်းမျှတစ်ဦး avid porn အသုံးပြုသူခဲ့ကြပြီ။ ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကအပ်သည်အထိငါကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ ငါတောင်ငါ့ဇနီး, ရည်းစားများကနှစ်ကြိမ်ဖမ်းမိတယ်။ သူမသည်ငါ့ကိုမှာစူပါ pissed ကြီးကသူမ၏ငါ porn တက်ကြည့်ဖို့သူမ၏ကျောနောက်သို့သွားခဲ့တာမလုံလောက်ခံစားရလုပ်ကဆိုသည်။ သူမကကျွန်မကိုဖမ်းမိဒုတိယအကြိမ်သူမသည်အစဉ်အဆက်ကိုထပ်ငါ့ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကိုကျော်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
ငါကြင်နာ၏, အချိန်တွင်သူမ၏ချွတ်မှုတ်ငါရပ်တန့်ချင်ပါတယ်သူမ၏ပြောသည်, ဒါပေမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအစဉ်အပြီးကတည်းကသူမ၏ကျောနောက်သို့ porn ကို အသုံးပြု. ပါပြီ။ ငါဘယ်လောက်စကားမပြောနိုင်သောနားလည်သဘောပေါက်ပြန်ရှာနေကျွန်မရဲ့အသက်တာ၌အကြီးမြတ်ဆုံးအရာဒီလောက်စွန့်ခဲ့သည်, ငါ့ဇနီး, ပဲဒီတော့ငါပယ်လူရှုပ်နိုင် ???? ငါကစဉ်းစားရန်ကိုဘယ်လိုရယ်စရာကိုရပ်တန့်သည့်အခါ။
အဘယ်အရာကိုနောက်ဆုံးတော့ငါ့ကိုငါပြဿနာတစ်ခုရှိနားလည်သဘောပေါက်လုပ်ငါပယ်ထားကြ၏တယ်အောက်တိုဘာလ၌ရှိ၏။ ကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်, 5, 10 ရန်, masturbate အကြောင်း 30-40 မိနစ်အလုပ်မတိုင်မီ porn ကို အသုံးပြု. 60 မိနစ်မာရသွန်အစည်းအဝေးများကနေသွား၏။ ငါ ED ဖွံ့ဖြိုးဤမျှလောက် porn ကို အသုံးပြု. စတင်လျင်မြန်စွာပြီးနောက်။ ငါဒီအကြောင်းကို2လကြာသွားစသည်တို့ကိုဒါမလုံလောက်ရှုပ်ထွေးကြောက်တယ်, ဦးနှောက်အာရုံကြော, စိုးရိမ်ပူပန်သလိုခံစားရတယ်, ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားချင်ပါတယ်အခါတိုင်းတူသောသလိုပဲနှင့်, ကိုယ့်ပို porn ကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးစားကိုယ့်ကိုကိုယ်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်လို့နိုင်ဘူးနှင့် ငါစိုက်ထူရနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါ။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ရုံကိုချွတ်ရဖို့ porn ၏ weirder နှင့် weirder အမျိုးအစားများကိုရှာနေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်သင်ယူတော့အားလုံးပုံမှန် porn စွဲရောဂါလက္ခဏာတွေ။
မင်းအတွက်ကောင်းတယ်။ ငါတူအခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီ။ နှစ် ၄၀ အတွင်းမှာ ED ရောဂါရှိခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါလုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့ခွန်အားမရှိတော့တာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကမှသတိမရခဲ့ဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှမမှားသည့်ဆရာ ၀ န်အနည်းငယ်ကိုအမြဲတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဘယ်တော့မှမမေးခဲ့ကြပါ။ ငါ၏အ PMO အလေ့အထနှင့်ဆက်စပ်သောရှိခဲ့သည်သံသယပေမယ့်သေချာမသိနိုင်အောင်, ဒါကြောင့်ငါဆက်ပြောသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လကကျွန်ုပ်၏ gf ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးပြproblemနာကိုတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းဖြေရှင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးသစ်များထံချဉ်းကပ်ရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုမရှိပါ။ ဤအဖွဲ့နှင့် Tedx ဗီဒီယိုကိုတွေ့ပြီးလွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်ကအေးဆေးစွာသွားနေခဲ့သည်။ ခံစားမှုပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
မင်းလိုပဲငါဟာအင်တာနက်မတိုင်ခင်ကတည်းကပါ၊ အသက် ၃၀ မတိုင်မီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတောင်မှမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ ထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့အစွမ်းအာနိသင်ဟောင်းကိုပြန်ရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်သာဖြစ်သော်လည်း၊ ပို၍ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ ခက်ခဲလာနိုင်သည်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုစတင်ရန်မည်မျှကြာသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လိုသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။
သင်တိုးတက်လာပါက Viagra ကို Viagra အစား Cialis ဆေးဖြင့်အစားထိုးရန်အလွန်နူးညံ့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသင်တောင်းခံနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊ ၅ မီလီဂရမ် Cialis တက်ဘလက်တစ်ဝက်ခန့်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ရန်လုံလောက်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားတဲ့ငါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာချိုင်းထောက်မပါဘဲဤအရာကိုကျွန်ုပ်ဘာသာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယင်းငရဲငါဖြစ်လာဘယ်အရာကိုရသလော [Long က rant / အော်ဟစ်]
အစကတည်းကလိုက်နာရမယ့်အရာကအကူအညီတောင်းတာ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာ ၀ န်ထမ်းတွေအတွက်ပထမဆုံး ၀ န်ခံတာပါပဲ။ သို့သော်လည်းငါသည်တစ်နေရာရာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့မှာကျွန်မအသက် ၂၆ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်ကောင်းမွန်သောအလုပ် (ပုံ ၆ ပုံ)၊ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ၅ ခုမှအပြည့်အဝပညာသင်ဆုဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၆'၂ လက်မအမြင့်၊ မထိုက်မတန် (ဆုံးရှုံးမှုအချို့ရှိနိုင်သည်) နှင့်သူငယ်ချင်းများဝိုင်းရံထားသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ fuck ဆိုတဲ့ငါ့အသက်ကိုမုန်း။ ဟုတ်တယ်၊ ငါထွက်လူအများကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကငါ့ကိုပိုဆိုးစေတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးရှိပေမဲ့လည်းကျွန်မဟာဗလာကျင်း၊
ငါတက်ကြွစွာသူတို့တောင်းဆို / စာရိုက်သူတို့နှင့်အတူထွက်လာမှငါ့ကိုတောင်းဆိုနေတာစောင့်ရှောက်သော်လည်းလူတွေကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အဲဒီအစားငါ edging, (ငါ့အဘုရားသူကပြောတယ်ရုံးထဲမှာဟုတ်ကဲ့) ငါ၏အရုံးခန်းထဲမှာထိုင်။ ငါထွက်ဆွဲငင်ရဘူးဆိုရင်, ငါ၏စိတ်ကိုတစ်နေရာရာတခြားအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ 10 နှစ်သမီးအရွယ်ကတည်းကအစဉ်အမြဲ fapper ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင့်ကောလိပ်ကျောင်းမှာတကယ်ပဲမကောင်းတဲ့တယ်။ ငါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကောလိပ် fapping ၌ငါ့အခမဲ့အချိန်အားလုံးနီးပါးနေခဲ့ရသည်။ ငါအံ့သြဖွယ်လူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်, မိန်းကလေးတွေချိန်းတွေ့, ပျော်စရာပစ္စည်းပစ္စယလုပ်နေခဲ့ကြရနိုင်တဲ့အခါ။ ငါအထက်တန်းကျောင်းလူကြိုက်အများဆုံးယောက်ျားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကနေကောလိပ်အတွက်ဘယ်သူမှဖြစ်ခြင်းမှသွား၏။ ငါလူရှုပ်နေခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာစကား (၆) ခုကိုပြောဆိုနိုင်ပြီးမည်သူ့ကိုမျှမပြောရန်ရွေးချယ်ပါသည်။ အဲဒီအစားငါဟာတစ်စုံတစ်ယောက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်နေတယ် (စာသားအတိုင်း၊ ငါကွန်ယက်အသိအကျွမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပြီးဒီဆွီဒင်ကောင်လေးတစ်ယောက်လိုဟန်ဆောင်လိုက်တယ်) နဲ့အမျိုးသမီးတွေကို r / gonewild မှာကောက်ယူလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါ့အားပေးသောအခွင့်အရေးများနှင့်အားသာချက်များအားလုံးဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အားလပ်ချိန်အချိန်အများစုကိုမိန်းကလေးများအား GW တွင်သုံးပြီးသူတို့ကိုငါနှင့်အတူမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အဆိုးဆုံးအပိုင်းကငါလိုချင်ရင်မိန်းကလေးတွေအများကြီးချိန်းတွေ့လို့ရမယ်။ သူတို့ကိုငါလျစ်လျူရှုခဲ့တယ် ငါ၌အဘယ်သူမျှမစာနာမှုရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာပစ္စည်းတွေပဲ။ တစ်ညတည်းသောအမျိုးသမီး ၂၅ ယောက်ကိုတစ်ညအိပ်ရာဖြင့်အိပ်ခဲ့ရပြီးမကြာသေးမီကမှဆိုးဝါးသောအခြေအနေများဖြင့်အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည့် (၁) နှစ်ရှည်ဆက်ဆံမှုတွင်ကျွန်ုပ်ရှိခဲ့ဖူးသည်။ မိန်းမတွေကငါနဲ့အတူနေဖို့ကျလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ငါနဲ့အတူနေချင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ပြီးပြည့်တန်ဆာကိုလိမ်တာပဲ။ မင်းထိုက်တန်တာကိုမင်းရမယ်လို့ငါထင်တယ်
ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကငါဟာကစားသမားတစ်ယောက်လို့ထင်နေလို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲသိလား ငါ ED ရှိလို့ပဲ။ ငါကလပ်မှာသူတို့ကိုတွေ့ပြီးသူတို့ကိုချစ်စနိုး (ဒါမှမဟုတ်လှည့်စား), သူတို့ကိုအိပ်ရာ။ ထိုအခါငါကတက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါရိုက်နှက်တယ်။ (အကြမ်းဖက်နည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲ Dom / sub လမ်းကြောင်းပိုရတယ်) ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာဒါကိုကြိုက်တယ် (အချိန်တိုင်းငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်) ။ ငါနံနက်ယံ၌ထ, အလုပ်သွား (ယင်း၏တနင်္ဂနွေပင်လျှင်) နှင့်သူတို့ကိုနှင်ထုတ်ရန်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဆင်ခြေတက်ပါစေ။ သူတို့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့ဖို့ရှက်တယ် ငါ၏အဟောင်းများကိုအတူငါ Viagra ကိုအသုံးပြု။ သူမ၏ကျေနပ်အောင်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါအပေါ်လိမ်လည်ရထိုက်တယ်။ ငါအရမ်းတလျှောက်လုံးလိမ်လည်ခြင်းခဲ့သည်။ သနားစရာ။ ကိုယ့်သနားစရာပါ။ အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကြက်မတစ်ကောင်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကြောင့်အသုံးမ ၀ င်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဟိုးရာ!
ဒီတော့ဒီမှာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဟာ ၄၂ ရက်အတွင်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကမွေးနေ့ကတည်းက (ငါတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေငါ့ကိုပါတီပွဲကျင်းပချင်နေပေမဲ့) အရမ်းကိုမူးနေတယ်။ လာမယ့်အပတ်မှာစီးပွားရေးကျောင်းတက်ဖို့ငါစာမေးပွဲကြီးရောက်လာတယ်။ အဲဒါကိုလေ့လာမယ့်အစား၊ ကျွန်ုပ်သည် (အလုပ်ချိန်အပါအဝင်) ယနေ့ခေတ်လုံးလုံးအမျိုးသမီးများအား GW အကြောင်းသတင်းပို့ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါရမှတ် ၇၀၀ ကျော်ရရင်ငါဟားဗတ်နဲ့စတန်းဖို့ဒ်ကိုသွားနိုင်တယ်။ အဲဒီအစားငါဒီမှာဂျင်းဘောင်းဘီမှတဆင့်ငါ့ကြက်ပွတ်နယ်, ငါ messaged မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်ငါ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြန်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အဆက်မပြတ်လန်းဆန်း reddit, ထားကြ၏ ငါနဲ့ဘာမှားနေတာလဲ
အဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်ုပ်တို့၌ကြီးမားသောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်အလားအလာရှိကြောင်းသိသော်လည်းအလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုများကိုချောက်ကမ်းပါးသို့မရောက်မီအချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ဆွဲပြီး၊ ငါသည်ငါ့စစ်မှန်တဲ့အလားအလာကိုသဘောပေါက်မဟုတ်ပါဘူးငါကအရမ်းစုပ်ကားအဘယ်သို့။ ငါသည်ငါ့လိုချင်သောအထိန်းချုပ်မရှိကြပါဘူး။ ငါ fuck ဆိုတဲ့အက်ကွဲတဲ့လူနဲ့တူတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံရှာ တစ်မနက်မှာနိုးထပြီးပက်ထရစ်ဘက်မန်းဖြစ်လာနိုင်မှာကိုစိုးရိမ်တယ်။
ငါအနားယူခြင်းနှင့်ငါ့အလုပ် / စာမေးပွဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ လူတိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်လူတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဆင်းရဲစရာဘဝကိုထိုနေရာတွင်ထားရန်အချိန်။ ကျွန်တော့်မိဘများ၊ ကျွန်တော့်အစ်ကို၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်တော့်ကိုကောလိပ်မှတဆင့်ပို့ပေးသောအမည်မဖော်လိုသူများကိုစိတ်ပျက်မိသည်။ ငါကလိမ်ပြောနေတဲ့ခွန်အားမရှိတဲ့အပိုင်းအစတစ်ခုပါ။
နောက်ထပ်ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး သို့သော်ဤအရာအားလုံးကိုရေးရန်ကက်သရင်းစိတ်ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွင်းပိုင်းခွန်အားကိုပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု။
နောက်ဆုံးငါ ED နဲ့ porn ကြားကအစက်တွေကိုချိတ်လိုက်တဲ့အခါရယ်လိုက်တယ်။ ငါသဘောတရားလက်ခံခဲ့သည်တခါဒါဟာဘယ်လောက်သိသာခဲ့ယုံကြည်နိုင်ဘူး။
ငါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ကိုပေးသောလေးနှစ်တာကာလကြာရှည်စွာဆက်ဆံခဲ့သောကြောင့်၊ porn မှ ED ကိုစတင်ခဲ့သည့်အချိန် (သို့မဟုတ်တကယ့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပြသခြင်းဖြစ်နိုင်သည်) အတိအကျသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အနည်းငယ်မှေးမှိန်သွားသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သူမနှင့်သူမ၏ပိုက်ဆံအတွက်ပြေး။ ငါမရှိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်အားလုံးကိုဖြည့်ရန်ညစ်ညမ်းသို့လှည့်ခဲ့သည်။ ဒီအဆိုးရွားဆုံးနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးမှုတွေမတိုင်ခင်ကငါ porn ကိုကြည့်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ငါမှာ ED မရှိခဲ့ဘူး။ တစ်ခါကအပြာရောင်လတွင်တစ်ရက်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲသွားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုမှဖြစ်ပေါ်လာသောဂန္ထဝင်အရှိန်အဟုန်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အလွန်အစွန်းရောက်သောအရက်သောက်ခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ပါ (အချိန်များစွာတန်ဘိုးမထားခြင်း၊ ဘဝတွင်မပါ ၀ င်ခြင်းစသည်)၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ပင်မသိဘဲမသိခဲ့ပါ
ဒီဆက်ဆံရေးကိုငါအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့နောက်မှာကျွန်မဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တစ်ခုခုထဲကို ၀ င်လာပြီးစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားတယ်။ သူမရဲ့အရိုးတွေကိုခုခံဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာစိုစွတ်နေတဲ့ခေါက်ဆွဲတစ်ကောင်လိုအားနည်းနေတာပဲ။ ငါအနည်းငယ်ရှက်ပေမယ့်အသစ်သောတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူရှိနေခြင်းနှင့်၎င်းသည်ထာဝရတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ အိမ်ပြန်လာတာ၊ ကိစ္စတွေမေးမြန်းတာ၊ ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်အလုံအလောက်လုပ်တာမှတ်မိသေးတယ်။ ငါအလွယ်တကူရနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြဖို့ porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ / ခေါင်းကိုခါလိုက်သည် နောက်တစ်နေ့ထပ်ကြိုးစားပြီးထပ်တူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုဖြစ်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ထင်ပြီးမကြာခင်မှာပဲပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။
နောက်ထပ်လအနည်းငယ်ကုန်လွန်သွားသောအခါကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော porn stereotype နှင့်ကိုက်ညီသည့်မိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမသည်တက်တူးထိုးထားခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၊ ဒီလိုငါကျိန်ဆိုတာကိုငါမှတ်မိတာကငါကိုလိင်အစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်စေမယ့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ခဏကြာပြီးတဲ့နောက်သူမတစ်ညတည်းနေပြီးတခြားနည်းတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန် ၀ ယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါစိုက်ထူလို့မရသေးဘူး။ ထိတ်လန့်အချိန်။ သူမသည်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်ခဲ့သည်။ (မဟုတ်ပါကနားမထောင်ဘဲ) ဒါကြောင့်သူကပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်နေပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှသာကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်နှင့်ပွတ်တိုက်ရုံသက်သက်သာဖြစ်သောကြောင့်ပြissueနာကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်ပြောသောအချိန်နီးပါးတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စိုက်ထူခြင်းများကိုပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အင်း၊ ငါထပ်ပြီးသတိမရဘူး၊ / ခေါင်းကိုခါလိုက်သည်
ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်သည် ပို၍ နှေးကွေးသောအခြားမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမနေရာတွင်ပါတီပွဲတစ်ခုတွင်အရက်မူးနေပြီး၎င်းသည်လိင်ဆက်ဆံရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲအနည်းငယ်အရူးလုပ်သွားသည်။ ငါခဏစောင့်ဖို့ပြောနေရင်တောင်ငါအရမ်းစွဲမက်စရာကောင်းပြီးဂရုစိုက်တတ်တဲ့ဒီမိန်းမကိုပတ်ပြီးလှည့်ပတ်ပြီးနမ်းတာကိုငါမခက်ဘူးလို့စာသားမယုံနိုင်ဘူး ငါနောက်တစ်နေ့အိမ်ပြန်သွား။ နီးပါးချောချောမွေ့မွေ့နီးပါး Googled "porn မပါဘဲစိုက်ထူခြင်းမရှိ" နှင့်သင်၏brainonpornဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အခြေခံဖော်ပြချက်ကိုပင်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကဲ့သို့ဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ပေမည်။ ဒါပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မဟာပုံမှန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မပေါင်းသင်းခဲ့ပေမဲ့ငါ porn ကိုစရှာဖွေလိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းစိတ်လှုပ်ရှားမိနိုင်သည်။ ဒါဟာတကယ်ငါ့ကိုပဲရယ်မောစေတယ်။ ငါလုပ်နိုင်တာကနည်းနည်းလေးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတွက်စာပိုဒ်အနည်းငယ်ကိုရယ်လိုက်တာပါပဲ။ ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကပိုဆိုးလာတယ်။ အနည်းဆုံးငါ့အတွက်ဟာသရှိတယ်။ ငါငရဲဘာမှားနေတာလဲ၊ ငါဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုငါမသိတဲ့အချိန်မှာအရမ်းရယ်ရတယ်။
ထိုည (ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်) တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးတစ်ပတ်မျှဘာမျှမကြည့်ဘဲသွားခဲ့သည်။ ငါမနေ့ကဓာတ်ပုံအချို့ကြည့်လိုက်သည်နှင့်အလျင်အမြန်ရူးသွားသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်မလုပ်နိုင်တာကိုဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ ခဏအကြာမှာငါအဆုံးမဲ့ပိုပြီးဒေါသထွက်သော်လည်းငါတစ်ခုခုငါ့ကိုဒီလိုကိုင်ထားခွင့်ပြုပါရန်။
TheUnderdog ရဲ့ရေးသားချက်များကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ ငါ porn ကိုတတ်နိုင်သလောက်စဉ်းစားရန်မကြိုးစားတော့ပါ။ ငါဒီစားသုံးစွဲလမ်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နှင့်အတူအကြံပြုချက်များနှင့်အားပေးမှုရှာဖွေနေသည်။ စာဖတ်ခြင်းအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်သင်ရှိသည့်အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။